Abụ m onye Africa ma jiri ya na-anya isi ... Abụ m ma ọ ga-adị mgbe niile ... | KONGOLISOLO
Cheta na abụ a ma ama "Okaman" nke onye Ivory Coast diva Monique Seka? Nke a bụ Ivory Coast ụnyaahụ, mana taa, a na-emecha ihe niile (mkpọtụ mkpọtụ na egwu Ivory Coast) ... (VIDEO)
Kedụ ka ndị ọcha siri chịkwaa akụkọ ọchịchị Black / Africa? Ha mere ka onye ọ bụla kwenye na, "Eziokwu ahụ bụ ụgha na ụgha bụ eziokwu"; ha gosipụtara onwe ha dị ka ndị ji ikike nke eziokwu ahụ, na ha debere ya n'onwe ha, nakwa na ọ bụ ya na-eme ka ha dị ike, "Ọ rụrụ ọrụ dị ka amara, n'ezie. "
Abọchị anwụnta na-adakwasị gị, na testicles gị, bụ ụbọchị ị ghọtara na enwere ụzọ iji dozie nsogbu na enweghị ime ihe ike.
A raara ụmụ nwanyị ojii a egwu: ọ na-egosi otuto, obi ike na ịdị mma ụmụ nwanyị ojii "Na ikele ha maka ihe niile ha na-emere anyị ụmụ nwoke isi" ... (VIDEO)
Goma mma Togo: Kedu ihe kpatara mma ojii / Afrịka na Togo? Amuru ya site na ihunanya, ihe umu nwanyi ndi Black / Africa choro ime, ihe ha nwere ekele, nke ihe ha choro ...
N'ịchọ "Mgbe niile-ọzọ": ụmụ nwoke na-achọ "mgbe niile-ọzọ" na n'inwe ikike karịa ịbụ "Ọ bụ eziokwu na ndụ ọgbara ọhụrụ na-eme ka ụmụ nwoke na-agbakọ ngwaahịa mgbe niile Akụrụngwa "
Oge ochie dị mma na "Térébinthes de la Justice"; N'ihi "Téréyaya Compilations", anyị nwere ihe ùgwù nke ịdabere n'oge ochie ndị mara mma mgbe egwu Africa na-enwu gbaa site na njirimara nka ya… (VIDEO)
Kedu ihe kpatara ndị isi ojii Afrịka, ndị a na-akpọ ndị Africa, ga-abụ "ndị ojii", mana ọ bụghị ndị Pacific Islanders (Pacific Islanders); na ndị India? Okwu agbụrụ nke agbụrụ "Negro ma ọ bụ Black", nke ndị Europe malitere itinye na ndị ojii Africa (ndị Africa); na Afro-ụmụ, site na narị afọ nke XNUMX (mgbe ya na ndị nwe ala Europe na Eshia rụchara ọrụ)
Jeanne Duval: ozi ezughi ezu na Jeanne Duval, mgbe ụfọdụ a na-akpọkwa Jeanne Lever ma ọ bụ Jeanne Prosper, mana ịma mma ya, agba akpụkpọ ahụ ya na mmalite ya mara "Ihe ọzọ doro anya bụ na ọ kpaliri Baudelaire, nke ya na ya ji biri ndụ, abụ ndị mara ezigbo mma, ikekwe ọmarịcha - mmanụ na-atọ ụtọ, agwọ na-agba agba, ntutu ”
Arụmụka: ebee ka okwu Métis si bịa? Okwu a na - akpọ mestizo sitere na Latin Mixtus nke pụtara Mixed, "Ngwakọta, nke okwu mestizo kpalitere, n'uche ndị na - eji ya (ndị Europe si mba ohu na ndị na - achị mba yana ndị pere mpe ndị na - agba mbọ) ịmụta asụsụ ha) o doro anya na ha si n'agbụrụ abụọ ”
Mgbakwunye nke egwu ịkpa oke agbụrụ nke "Ice cream Trucks": abụ olu a na-ejikarị abụ "Ice cream Truck" sitere na abụ a na-akpọ "Nigger hụrụ n'anya anyụ Ha! Ewoo! Ewoo! »… (VIDEO)
Bible: akụrụngwa na ijikwa nrubeisi nke ndị isi ojii / ndị Africa; Akwụkwọ Nsọ na-atụ anyị ụjọ ma na-aga n'ihu na-atụ anyị ụjọ na ntinye nke ntinye ihe karịrị otu narị afọ "Ọ bụ n'ihi akwụkwọ nsọ na"
Arụmụka: Iso Christianityzọ Kraịst adịghị iche na iyi ọha egwu; Kraịst bụ na ọrụ nke ịgba ohu na colonization nke Africa "Ọ bụ megide a ndabere nke Christianity na 180 nde ojii / ndị Africa na-belatara ndị ohu"
Ekwere m na ndụ mgbe a nwụsịrị, nanị n'ihi na ike enweghị ike ịnwụ; ọ na-agagharị, na-agbanwe ma na-akwụsịkwa "Ihe katapila kpọrọ ọnwụ, urukurubụba ahụ na-akpọ nlọghachi"
Olee otu ga-ezuru? Ọ bụrụ n ’ịchọrọ izu ezu, ọ dị mfe“ N’uche, enwere ụzọ abụọ ị ga-esi zuru oke ”” Otu n’ime ha bụ ka ị na-agbakọbawanye na nke ọzọ bụ ịchọ ntakịrị na obere
Arụmụka: agha nke ihe niile megide mmadụ niile; e nweghị agha ma ọ bụ agha ka njọ karịa nke agha nile megide mmadụ nile; n’ihi na anyị ma mgbe ọ ga-amalite, mana anyị amaghị mgbe ọ ga-akwụsị; anyị maara onye ọ malitere, mana anyị amaghị onye ga-apụta n’agha ma ọ bụ mmeri, ehichapụ ma ọ bụ dịrị ndụ
Onye Ghana na-ese ihe Azizaa na-ajụ ike nke Iso Christianityzọ Kraịst banyere Ghana: Kedụ ka onye sitere n'Africa si fee otu ngwa ọrụ eji egbu ndị nna nna ha n'ụzọ na-enweghị isi? VIDEO (Na)
Organic mma: ị gaghị ekwenye na ịma mma bụ ihe ị na-ahụ na TV ma ọ bụ na magazin "Mma a bụ ụgha silicone, ịcha akwa, ịwa ahụ, patchwork" Ọ bụ mma Photoshop, mma mara mma, nke dị anya na ọdịdị niile; ụzọ kachasị mma iji nọrọ bụ ịnọ ka ihe okike kere gị
Maka ihe, ọdachi dị mma: ọ nweghị onye ga-azọrọ na ya maara ihe niile ma ọ bụ mara etu esi eme ihe niile "Nwoke ọ bụla nọ n'ụzọ amaghị ihe ewezuga ihe ọ maara ma ọ bụ mara etu esi eme" Amaghị ama abụghị mmehie, mana ịjụ ịmụ bụ mpụ
Arụmụka: mmadụ bụ ahụ, mkpụrụ obi na mmụọ - ka anyị chọọ ime ka ịdị ukwuu nke mkpụrụ obi na mmụọ; choo ime ka aru di elu; ka anyị gbalịsie ike inwu gbaa; ka anyị chọọ elu ime mmụọ; chọọ mmeghe nke gland
Ọrụ nke ncheta & Ajụjụ: olee ebe ọdịbendị nke inwe mmekọahụ si, “Na ọnọdụ fellatio? N'ozuzu, fellatio bụ mmekọahụ nke mejupụtara mkpali "Bucco-lingual"; enwekwara, site na nke a, nke na-agafe mkpali dị mfe na afọ ojuju; maka ọtụtụ, n'Africa, mgbe anyị na-ekwu maka fellatio, anyị na-asị "Tinye ụlọ okpuru ulo" ... (VIDEO)
Mma / oji nke Africa: odighi ihe nwere ike iguzogide ezigbo agwa ezi agwa, anyị nwere ike ijide n’aka ma kwenye na anyị ga-apụta ”Gamilah Lumumba Shabazz, ada Malcolm X
Ebee ka onye ndu ime mmuo nke ndi Black / ndi Africa? N'ụwa a, obodo ọ bụla nwere ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ime mmụọ ọ kwesịrị, "Ndị ojii / ndị Africa enwere mmụọ ime mmụọ? Ọ dị adị ?? Ebee ka ọ nọ ?? "
Ndi isi ojii / nke ndi Africa na nke Mmuo Nso: soro Nwa nke Black / African Christian kwurita akwukwo nso, gosi ya ihe megidere ihe odide nke Akwukwo Nso, know mara otu o si zie ezi?
Paradoxes nke ndi Kraist: I Ndi K] rint 11:14 “nature O kughi na okike n’onwe ya kuziere gi na obu ihe nzuzu nwoke irapu ogologo ntutu? Ka anyi chee na umu nwanne anyi ndi Africa
Ànyị kwesịrị ikwu Amen n’ihe niile edere n’ime Akwụkwọ Nsọ? Akwukwo nso nke Akwukwo Nso bu nke gbanyere mkpọrọgwụ n’uche ndi Kristian nke ukwuu na nkatọ pere mpe erugo ka mkparị; n'agbanyeghị nke a, enwere ọtụtụ ihe Akwụkwọ Nsọ anaghị akatọ, ma Ndị Kraịst enweghị ike ịme "Akụkọ banyere Lọt na ezinụlọ ya bụ ihe atụ"
Arụmụka: Gịnị Mere Chineke ji kee ụwa? Ọ bụrụ na Chineke nwere ebumnuche, kedu ihe kpatara na O meghị ya n'onwe ya kama ịgabiga na steeti etiti. Steeti ndị a na-etiti dị iche maka ebumnuche ya "Chineke nwere mmasị okike ụwa?" "
Ihe ncheta nke Taz Bolingo: ị chetara otu egwu Taz Bolingo a? Ma olee ebe ha gara ?? Mụ nwanyị ekerewo òkè dị mkpa na ụlọ ọrụ egwu n'ụwa niile ... (VIDEO)
Beautyma mma nke Euro-Africa: ọmarịcha ọtụtụ ihe yiri ya "Euro-African mara mma na-ebi ndụ dịkarịsịrị elu, ọ bụ ịma mma dị egwu - oke ọ bụla na-ahapụ ogige ya ịpụ na ogige nke ọzọ"
Ebumnuche anyị abụghị ka anyị kpọọ asị ma ọ bụ hụ onye ọchịchị ahụ n'anya, ọ bụ naanị ajụjụ gbasara ọbụbụeze na nlanarị: anyị abụrụla ndị bi na Africa ma anyị na-ekele ndị nna nna anyị: "Ndị Amerindia na na ụfọdụ ndị aborigine adịghị otu chi ahụ ”
Kedu onye enwetụbeghị mmechuihu na mmekọrịta ịhụnanya? Ọ bụrụ n’inweghi mmechu ihu na otu ụbọchị, mgbe ahụ ị hụghị n'anya ma ọ bụ inwe mmekọrịta na-adịghị mma ma ọ bụ na ọ bụ gị bụ onye mbụ na-emechu ihu, mana jigide na ndụ na-adị mgbe ọ nwesịrị. n'ihi obi mgbu
Ọdịiche dị n'etiti ihe ọmụma na ihe ọmụma: ọ bụrụ na enwetara ihe ọmụma site na mpụga - ihe ọmụma, n'aka nke ọzọ, enwetara site na "Nke a bụ ebe nkesa nkewa"
Arụmụka: e nwere ihe niile na enweghị ihe ọ bụla na Facebook, ihe niile dị ebe ahụ, ihe niile dị ebe ahụ; na Facebook, enwere ụdị ndị dị iche iche, ndị debanyere aha na ngalaba niile (...)
Dobet Gnahoré: onye na-ese egwu nke nwere njem pụrụ iche, ọ sitere na Ivory Coast na West Africa, ọ tụgharịrị na abụ 2010 na Kiswahili "Samahani", nke pụtara "Pardon" ... (VIDEO)
Nwa ojii / nke Africa & uru a na-enweghị atụ nke Melanin: Melanin nwere uru a na-agaghị echefu echefu, ọ bụụrụ gị ihe ùgwù inye ya "Melanin bụ onye ntụgharị nke ike anụ ahụ"
Na agam n’ihu: enwere ndi mmadu n’enwe ike iwelata obi ha “N’ ohere obula, ha n’enye n’enyeghi etu ha si di ma obu nke ha nwere”
Arụmụka: nwoke zuru oke & nwanyị zuru oke "Ha abụọ adịghị, yabụ na anyị ga-akwụsị ichere, n'ihi na ndụ, ọ naghị eche, ọ gafere, ọ na-agba ọsọ, ọ ga-agwụ"
Lee ndị ohu ụlọ a, "Alienees": ọ ka mma ịbụ nwunye afụaka agadi nwoke karịa ohu nwa okorobịa ... (VIDIO)
Mma Kongo (DRC): okwu maka di na nwunye ndi egwu a, ndi bụ ezigbo ndị egwu n'agbanyeghị na a na-akpọ abụ okpukperechi, ha na-agọziri anyị Chineke nke Israel, Chineke nke ndị ọzọ, Chi nke ndi ozo na Chineke nke igwo ihe
Ọrụ ncheta: Michelle Obama, onye nnọchi anya ohu na ọkara uwe, “sitere na Adam na Iv”; maka ebumnuche nke ha, ndị editọ nke otu akwụkwọ akụkọ Spanish nọchitere anya Michelle Obama, dịka ohu gba ọtọ ọkara
Arụmụka: ịma mma na-esite na mgbu; ị ga-anabata ma ọ bụ ịnagide ihe mgbu oge iji rite uru site na ịma mma ruo mgbe ebighi ebi; na nke ahụ bụ ịma mma nke ọdịbendị anyị anyị hụrụ n'anya, nke Druids?
Burkina Faso: onye na-ese ihe nkiri Nourat na ọdụm - ndị agha Burkina “Themalite oke ọgụ nke ọgụ megide iyi ọha egwu bụ ihe na-abaghị uru” Egwu anaghị ezere ihe egwu ahụ ma na-eme ka ndị mmadụ ghara ịkpa ike… (VIDEO)
Blackcha ojii / nke Africa: ịmara Black / mma Africa; “Lee, Mara, Ike, Nwere, Pụta, Nwee nkwekọrịta, Na-anata; (Bụ (…) ihe ndị a niile bụ nke Black / African beauty ”
Oge eruola ka ndị ojii / ndị Afrịka weghachite ụgwọ ọrụ ha na ndị mba ọwụwa anyanwụ: ọ bụrụ na ndị Black / Afrika niile nwere ike ime ka Mwozulu Diyabanza bụ nke ha site n'aka ajọ onye ọwụwa anyanwụ ”… (VIDEO)
Arụmụka - Cameroon: ndị na-agwọ ọrịa ọdịnala na-enupụrụ Com-19 sham isi; ndị ọdịnala na-agwọ ọrịa ọdịmma nke Cameroon achịkọtara ọnụ iji kọsie ike n'okpukpe a na-efe efe megide Coronavirus ... (VIDEO)
Coronavirus: mara ihe, mara ihe na ọkara; “Ha mepụtara Coronavirus iji mee ndị isi ojii / Africa; Covid-19 refied; ndi ojoo, na ha bu ndi ocha, ha enweghi nchebara echiche diri nwoke Black / Africa, mana lee ka ndi Coronavirus si wee hu ”… (VIDEO)
Mma nke Senegalese: Mma Senegal na-esite n’alụlụ nke ọdịnala na nke ọhụụ; ọ bụ ngwakọta na nguzozi zuru oke nke ọdịnala na eke "Lebagodị anya na Senegalese mara mma iji nwee mmasị na ntutu isi ya mara mma, edozi isi nke na-eme ka tradi na-egbuke egbuke nke oge a"
Mgbe ịkpa ókè agbụrụ na-akpọ onwe ya n'ime Egiptology; n'ihi ịkpa ókè agbụrụ, ndị Egiptologists na Sudan na-echekarị na ha na-egwupụta ihe ndị dị n'ụdị oke ala Egypt, ebe ha ekweghị na "Black" Afrịka nwere ike imepụta nnukwu mmepeanya
Nsonaazụ mebiri emebi nke ịchịkwa agba; ichiche, gabiga mpụ anụ ahụ, nke zubere ịhapụ mkpụrụ obi anyị, kpochapụ njirimara anyị, igbu omenala anyị na asụsụ anyị, nke mere na anyị ghọrọ ndị ohu nke anyị ka bụ taa ... ( Na)
Arụmụka: ogige mmanye manye ndị ọrụ mmanye (1900 - 1946); ichu ochichi ichighachi bu igba nke ohu; nihi na uzo nile ha di otu
Nwa ojii / Ndi Africa: mpako n’inwe nwanyi nwanyi Black / Africa; Enwere m mpako na m bụ Black / onye Africa nanị n'ihi na amụrụ m n'Africa, "Ọ bụ n'amaghị ama" Ugbu a enwere m mpako ịbụ onye Black / African n'ihi na amụtara m Mara akụkọ banyere ndị nna nna m, achọpụtara m ihe ha wetara n'ụwa a
Kedu ihe kpatara ọdịnihu nwanyị ahụ? Nwaanyị nwere ihe nzuzo na Chineke nke nwoke amaghị; dika Akwukwo Nso si di, Chineke wedara nwoke ahu n’ura ura mgbe o kere nwanyi; tupu ya akpọte nwoke ahụ, gịnị ka Chukwu gwara nwanyị ahụ ??
Ọrụ dị iche iche icheta: na Nọvemba 04, 2012, nnukwu kpakpando ozi ọma ahụ, nwanne nwanyị n'ime Kraist L'Or Mbongo chọrọ ịhapụ di ya Christian Lemba, n'ihi ekwesịghị ntụkwasị obi na enweghị ezi obi, ịhụnanya na-enweghị atụ.
Arụmụka: gwa m anụmanụ ị na-azụ, m ga-agwa gị onye ị bụ; ebe West na-emejọ nkịta ahụ, Black / African tames feline "Afrịka abụghị nwa mgbei mụrụ nna ya na nne ya, kama, inwe olileanya." ... (VIDEO)
Zembe-Zembe: onye amaghi onye mebere iwu agbanyeghị "Oti mkpu a ma ama (Houlouloulou - Zembe-Zembe) aghaghi icheta ihe" ... (Audio)
Mma ndi American-nke America: n’etiti mma, echiche efu ma obu mkpasu iwe gbasara Séréna Williams? Serena Williams, kpakpando a, onye ọkpụ ihe nkiri Tennis na-agba n’Afrika ọ bụla, onye meriri ihe karịrị iri atọ, mara mma n’ụzọ nke ya.
Zọ ọchịchị nke agbụrụ na Rwanda: ndị ọdịda anyanwụ nke kwuru na ha bịara mmepe anya wee meghee anya ha n'anya ndị mmadụ ha chere na ha amaghị ihe ọ bụla chọpụtara na ndị Tutsi nwere ọmịiko; ha matara mmetụta obi ya
Ọrụ dịịrị icheta: ndị uwe ojii France na ọrụ "Négro-phobiques"; n'oge ndị na-adịbeghị anya, e gosipụtara ndị uwe ojii France site na mkpasu iwe megide ịkpa ókè agbụrụ; Ọtụtụ ndị uwe ojii na-eleghari onwe ha anya dị ka ndị isi ojii / ndị Africa, ha wee tinye foto ndị ahụ na netwọ mmekọrịta, ụzọ ha ga-esi kparịa ndị isi / ndị Africa.
Arụmụka: Ndị Arab, Turks na Groco-Copts bụ ndị mgbago ugwu na ndị mwakpo nke Egypt, ha abụghị ụmụ amaala Egypt.
Nwa ojii / ndi Africa: Ndi ojii / ndi Africa bu ndi biri nke mbu British Britain; "Tupu ndị ọcha achị achịa ihe a na-akpọ ugbu a British Isles, ndị ọzọ hiwere ebe ahụ kemgbe chi bido, ahapụlarị ụzọ a na-agaghị ahụ anya na akụkọ ihe mere eme nke ókèala ndị a"
Dịka anyị maara ndị nsọ, anyị na-asọpụrụ ha: mba ọ bụla nwere ndị dike ya, ndị na-eduzi ya na ndị a ma ama na akụkọ mgbe ochie "Ndị a niile, ndị gosipụtara oge ha, ya mere, ndị mmadụ agaghị echefu echefu maka ndị mba ha."
Site n'ịbụ ohu ruo n'ọchịchị agbụrụ site na ịkpa ókè agbụrụ ebumnuche nke ndị mbuso agha ọcha abụghị naanị ikewapụ agbụrụ Black / Africa na agbụrụ ndị ọzọ, kamakwa iji mee ka ha bụrụ ohu nke ịnọgide na-achị ha.
Azụmaahịa ohu Europe, ọkachasị ndị ndị Portuguese bibiri Africa: yabụ, ọbịbịa nke ikpeazụ na Africa bụ njedebe nke afọ 4 nke ihe omume ndị Kamite nụrụ site ndị ojii / ndị Africa.
Arụmụka: olee ebe isi mmalite nke nkewa anyị n’Afrịka si? Isi mmalite nke nkewa ndị dị na Africa si mba ofesi "Ha bụ ndị colonial"
N'ịbụ onye ndị uwe ojii chere ihu na narị afọ na United States, Trump nọgidere na-ekwu okwu: mgbe onye ọkpụ ojii / onye Africa, n'etiti National Huma gburu ikpere n'ala, Onye isi ala Donald Trump were iwe, mana ọ nọgidere na-ekwu okwu. mgbe onye uwe ojii White tinyere ikpere ya n'olu nke onye isi ojii / onye Africa wee gbuo ya ... (VIDEO)
Mma ndi Sudan: mma di ocha "Mma mma ndi Sudan bu nke ha na ndi mara mma" mma defying ntụnyere
N’agbata Josef Kabila na Chineke nke Israel, onye bụ onye kachasị ekpu? Brothersmụnne nwoke na nwanne nwanyị Kongo, n'etiti Joseph Kabila na Chukwu nke Israel ị bụ onye na-atụ egwu n'ezie?
Onye Africa - akara aka na aguu nke ezi ndi ojii / ndi Africa: ezigbo ndi ojii / ndi Africa, ibi ndu ka nma, site na ndi Africa jiri Chineke swearụọ iyi, n'ihi na dika (Africanity) si kwuo, onweghi ihe ojoo uwa "Ihe odi ka odi nihi na ighota iwu nke uwa site na igha mmadu."
Ndi Negroes na ihunanya ha na umunne ha ndi no na ogwe aka bu "ndi nwe ndi nwe obi", olee otu ndi isi ocha bu ndi ozo di iche na ndi agha ibe ha na Negro? Legodị etu ndị isi ojii / ndị Africa si enwe mmasị na anyaụfụ ndị agha White
Anụ ọhịa wolf bụrụ atụrụ dị ka atụrụ: Ndị ojii na ndị Afrịka na ndị ọcha na-abụkọ abụ "Nna Yetu", Pater na Swahili, ekpere nke onye a na-akpọ White Onyenwe anyị Jizọs ... (VIDEO)
Mma Kongo (DRC): you nweghị ike ịbụ kpakpando mgbe ị ka dị ojii? Nwanne nwanyị a n’ime Kraist kpọrọ L’Or Mbongo tupu ọ ghọọ onye kwere ekwe, ya bụ, tupu a mụọ ya ọzọ wee bụrụ abụ, ọ bụ onye isi ojii, ma mgbe ọ nabatasịrị Jizọs Kraịst. dika onyenwe ya na onye nzoputa nke onwe ya, o wee di ocha ” "
Atụmatụ nke amaghị ama: atụmatụ a gụnyere ime ka ọha na eze ghara inwe ike ịghọta teknụzụ na ụzọ eji ejikwa ya na ohu ya.
Atụla egwu banyere onye ị bụ, ezochila ihe ị na-achọghị ịbụ: ndụ, hapụ onwe gị ịnọ n'ime onwe gị "Atụla egwu"
Arụmụka: Mymụnne na ụmụ nwanyị Black / Afrịka, ka anyị chee maka ya "Ebe ọ bụ na anyị bụ ndị Black / ndị Africa na-agbachi nkịtị mgbe niile ịta ndị West ụta maka ihe ha mere anyị na-ezighi ezi"
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Zaire na Canta Nyboma: anyị nọ na 1974; n’oge ahụ, ndị otu a na-akpọ Zaịaraị kwenyere na Mobutu bụ onye nzọpụta ha; na Mobutu n’onwe ya kwuru na ya bụ nzọpụta nke ndị ya… (VIDEO)
Ornye ma ọ bụ gịnị ka ị na-ekpe ekpere (na-efe ofufe)? Mmadu niile na-ekpe ekpere (ife)? Ma naanị ihe dị iche bụ onye ma ọ bụ gịnị ka ị na-ekpe (ife)? Peoplefọdụ ndị na-ekpe ekpere (na-efe ofufe) ego, ike, ọgụgụ isi, Chineke nke Israel, chi ụgha nke ịgba ohu; na ndị ọzọ bụ ezi Chineke, Chineke nke ndị nna nna anyị
Jesus Christ, osisa n’enweghi nsogbu nye ndi Black / ndi Africa: ndi n’iru na ndi kwere ekwe Ndi Black / ndi Africa kwuru na obu Jisos Kraist bu onye n’eme ka nsogbu ha nile puta, ma mgbe ha nwere nsogbu, Jisos Kriast n. agbadaghị site na mbara igwe iweta usoro ọ bụla
Kedụ ihe ga-eme nke Onye Akpọpụtara gị Jizọs Kraịst n’ime afọ 1000? N’ime narị afọ ole na ole, iri anụ ahụ na ị drinkingụ ọbara nke otu nwa Chukwu (Jizọs) ga-abụ ihe nzuzu nke na ọgbọ nke ndị mmadụ n’oge ahụ anyị ga-akpọ ndị omekome.
Chineke nke Israel gwara umu ya ndi a kpọrọ aha okwu: Deuterọnọmi 21: 10-14 “10 mgbe ị na-aga ibuso ndị iro gị agha, mgbe Jehova, bụ́ Chineke gị, nyefere ha n'aka gị, ị ga-emekwa ha. ndị mkpọrọ »
Arụmụka: Ndị Juu bụ ndị ohu n’Ijipt? Ozioma nke Saint, nke anakwere na obu ezigbo ya, bara ezigbo uru n’inyere anyi aka ighota ma ndi Juu aburu ndi ohu n’Ijipt ma obu na ha abughi ndi
Mma Africa-American: Chineke nke afọ ojuju naanị ya na mma ma ọ bụ ịdị mma nke obi abụghị nke mpụga nke mmadụ? Nke a bụ Meagan Good, nwunye onye ụkọchukwu America
Kedu ihe mere Kanye ji chụpụ nwanyị chọrọ ịlụ ya (ma kpachie Amber Rose) ịlụ Kim Kardashian? N’afọ 2007, e sere foto Kanye West na onye ya na ya chọrọ ịlụ Kim Kardashian "Afọ iteghete gachara, megide nsogbu niile, Kanye West lụrụ Kim Kardashian onye ha mụrụ ụmụ 3"
Arụmụka: mgbakọ na mwepu gbasara nwanyị rue nwoke, "Ezigbo ọlụ Kongolisolobụ na Kongolisoloises, ọ bụ eziokwu na nwanyị bụ ezigbo onye na - agbakọ ihe maka ụmụ nwoke? "
Ikiri kpamkpam: Nke a na song na-enye ọgazị bumps ... (Na)
Kedụ ka a ga-esi kpọpụta ọha mmadụ n’abis? Agbalị na-eche etu ị ga-esi mee Africa n’abis ebe ọ na-adaba, onweghi onye nyocha ga-egbo onwe ha afọ, "Ọ bụ ezigbo nsogbu" ... (VIDEO)
Lovehụnanya bụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị maka mmadụ abụọ: anyị ahụghị nwanyị n'anya n'ihi ihe o kwuru, mana anyị hụrụ ihe ọ na-ekwu n'anya n'ihi na anyị hụrụ ya n'anya
Onweghi onye na eme nke oma n’enweghi ihe egwu: egwu nke iwere ihe ojoo di na mmechuihu, n’uzo ozo, odighi onye n’enwe ihe osochu n’enweghi nsogbu.
Mgbasa ozi ndị a jikọtara na ịkpa ókè na ịkpa ókè agbụrụ: njehie ọ bụla bụ mgbaghara ma ọ bụrụ na ọ na-enwetụbeghị ụdị ya "Lee mgbasa ozi a maka Dove ncha ebe nwa nwanyị na-acha ọcha na-acha ọcha mgbe iji Dove ncha"
Arụmụka: Ndị ọcha (ndị ọdịda anyanwụ) bụcha ndị okike na ndị isi ala - dịka echiche nke ndị ọcha, "Ndị isi ojii / ndị Afrịka enweghị mkpụrụ obi, ha dị ka anụmanụ, anyị nwere ike ikpochapụ ha, enweghị nsogbu", a kwupụtara Churchka nke Chineke nke Israel… (VIDEO)
Atụmatụ diabolical nke Nzukọ Berlin: Nzukọ nke Berlin bụ naanị Black Mass na obi nke atụmatụ diabolical, nke "Kewaa ndị mmadụ ka ha chịa mma" ... (VIDEO)
Gini mere mgbe nwanyi di ime, obu onye obula n’abia ikpuchi obi ya ma na-ekele ya? Mana, ihe ịtụnanya, na onweghị onye bịara ibute ọrịa onye edemede nke afọ ime iji kelee ya?
Ndị Africa: ọ bụghị ike ma ọ bụ mkpebi siri ike nke ndị na-emegide anyị ga-egbu oge ịga nke ọma na ọgụ a, kama na ọ bụ adịghị ike nke ịdị n'otu anyị "Ọdịda anyị bụ n'ihi enweghị njikọ anyị"
Arụmụka: gịnị ka eji eme na televishọn n’ime ezinụlọ Black Africa? Igwe onyonyo, n'ime ezinụlọ anyị na Black Africa, bụ otu n'ime ihe kachasị ike maka mmebi nke ụkpụrụ Black / Africa anyị, "Ọ bụ ngwa ọrụ iji chekwaa oke"
Mụaka White na Eshia na-abụ abụ "Adị m oji, enwere m mpako" Na James Brown… (Audio)
Ihe ịtụnanya Black / African beauties: site n'echiche ha, Black / African beauties na-akpali mmụọ dịka oke ọnụ ahịa, ha na-akpali mmụọ ya site na nghọta ha… (VIDEO)
Kedu oke mkpa agụmakwụkwọ mahadum dị n'Africa? N’Afrika, ụfọdụ ndị mmadụ na-eche ihe bụ ebum n’uche ịmụ akwụkwọ mahadum, kedu ihe dị ha mkpa ma ọ bụ ọrụ ha?
Ejighi agha dị iche iche nke ndụ merie site na ike ma ọ bụ nke kachasị ọsọ, kama ọ bụ site na ndị kwenyere na ha - Nkuzi agụmakwụkwọ nke Ogwumagana "Onye ogba ama bu ezigbo onye nkuzi - lee ya anya"
Ismkpa ókè agbụrụ abụghị usoro mmepe anya, dị ka ndị ọcha na-echekwa; ọ bụ ekworo kemgbe narị afọ gara aga maka ike mmekọahụ nke melanoderms na egwu dị egwu nke ịbụ onye na - achịkwa ụdị okike ojii kpochapụ.
Mutuashi: bu akwukwo eji egwuri egwu na udi egwu nke sitere na egwu ndi Baluba site na Kasai rue DR Congo… (VIDEO)
Nwanyị nwanyị nke Burkinabè mara mma: A mara ya n’uche ọha na eze dị ka “Nwanyị nke ụwa”, a maara ya nke ọma ma mgbe ihe kpatara ya chọrọ ịlụ ọgụ, ọ karịrị ya mmụọ. ihe a mara ikpe ọnwụ "
Ọ bụrụ na Kongo (kọntinenti Afrika) bụ onye, ​​a ga m akpọ ya onye mmekọ nwoke na nwoke (adịghị ike), maka na mmadụ niile na-agba ya ọsọ
Arụmụka maka arụmụka maka ụmụ nwoke: ọ bụrụ na gị na nwanyị alụrụ nwanyị, ị ga-adị njikere iso ya biri ma ọ bụ lụọ ya? "E kwesịrị ijide nwoke ọ bụla dara ogbenye nke na-achọ ịlụ di"
Ndị otu South Africa “Ndlovu Choir” kpebiri ịkekọrịta ndụmọdụ iji zere Covid-19: emetụla ihu gị aka, saa aka gị, agakwala dọkịta, kpọọ ya… (VIDEO)
Mma ndi America n’Afrika: enwere ihe di iche n’etiti itolita n’uto na ito n’ime mmuo? "Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị mata uru gị bara, buru ụzọ ghọta nke ndị ọzọ"
Icheta onye na-echeta ya? Onye ma pastọ Ngoy Mulunda ?? : ọ dị mfe ịhapụ ihe ị jidere karịa iweghachi ihe ị hapụrụ
Nwanyi nwanyi nke onye nwe ala eze n’achi eze mgbe eze di, onye site n’achi ya buru onye ochichi n’onwe ya: site n’aka ikike nke Chineke, nwoke bu eze nke uwa, na ihe nile E kere ụwa maka ya
N’otu oge, nwanyị nwanyị na-eme ka onye isi ala bụrụ onye isi ala Putin Putin: n’ihi na ọtụtụ, ịchị ọchị ma ọ bụ ọchị nke Onye isi ala Russia Vladimir Poutine bara uru karịa ọla edo, n’ihi otu oge, ọnụnọ nke onye Africa ejisie ike wepụ ya ọchị site n’aka ya. nwoke oma
Arụmụka: "Eziokwu na "gha" Anyị ekwuwo mgbe niile na onye amaghị ihe bụ onye na-amaghị, onye na-agụghị akwụkwọ na ụfọdụ ihe "M na-ekwenyeghị na ndị na-amaghị ihe abụghị onye na-enweghị. Amụtaraghị ihe ọ bụla, mana onye mụtara ihe na-ezighi ezi ”… Eziokwu ka ọ bụ segha?
Black / African mma: kedu profaịlụ? Ihu nwere nkenke, imi a na-ahụkarị nke na-alụkarị ụdị ọdịdị ihu, ọnụ na-adọrọ adọrọ na ntutu dị mkpụmkpụ mara mma, "Nke ahụ bụ nwanyị mara mma bụ"
Okwu ikpe azu nke Martin Luther-King, tupu ogbugbu ya, nke ahụ bụ ikwu na Eprel 04, 1968: Martin Luther-King kwuru okwu na-akpali akpali n'okwu ndị a ... (VIDEO)
Nkewa-19: Ogologo oge ole ka ndi ojii / ndi Africa ga-an o dika ndi okacha amara nwere okacha? Kemgbe ha nwetara nnwere onwe ọtụtụ iri afọ gara aga, ndị isi ojii / ndị Africa ka bụụrụ ndị na - eso ụzọ ọcha "... (VIDEO)
Covid-19: Ka anyị chee maka ya ntakịrị “China na-ekwu na ya emeriela nje Corona kpamkpam; otu o sila dị, ọ bụ ebe izizi nke oria ojoo n'ụwa ”… (VIDIO)
Arụmụka: mmiri bụ ndụ, ha kwuru, mana na Africa mmiri abụghị ndụ, kama ọ bụ "Ọrịa afọ ọsịsa, ahụrụ na-eri mmadụ, afọ na-egbu ya, ofufe ọrịa, coronaviruses (…) »Jiri mmiri pọpụ saa; bụ ihe dị egwu nye ahụ mmadụ na Africa
Covid-19: ogo ajọọ njọ nke ndị ọdịda anyanwụ, emetụta “Ka ọ dị ugbu a, West bụ akụkụ nke ụwa nke nje Corona kacha emetụta ma ọ bụ emetụta ya; na nsonaazụ ojoo ”… (VIDEO)
Kedu onye a ga - akpọ ogbu mmadụ? Ọ bụ naanị ndị omekome ka okwu ahụ bụ igbu ọchụ?
Arụmụka: ịhụnanya nwoke nwere naanị akụkụ nke ndụ ya dịka nwoke, mana ịhụnanya nwanyị nwere ndụ ya niile ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Covid-19: ihe kachasị njọ bụ ka a ga-atụ egwu na Black Africa n'ihi amaghị ama, enweghị mmasị na nleghara anya, nje Corona na-ebili, na-ama jijiji ma na-ama jijiji ụwa "O metụtara ọtụtụ puku mmadụ na China ma kpatara ọnwụ nke ihe karịrị mmadụ 2000 ”… (Video)
Enwere m mmasị na ndị na-aga n'ihu na-agba egwu ọbụlagodi mgbe egwu akwụsịla, n'ihi na ha bụ ndị na-aga n'ihu n'ihu ọ bụrụ na olileanya adịghịzi.
Arụmụka: Olee otu ụmụ nwoke si bụrụ mba ofesi na-ahụ maka ụmụ nwanyị? Girlsmụ nwanyị taa na-akpọrọ ụmụ nwoke maka nzukọ mba ụwa; ọ na-abụkarị ...
Nzambé achoghi onye o bula kere uwa, kpakpando, anwu anyi niile anyi na-akpọ kpakpando, mbara ala na sistemu niile: Nzambé achoghi onye obula kere uwa anyi, ugwu anyi, ala, oke ohia, oke osimiri na ihe niile dị n'ime ya ... (VIDEO)
Arụmụka & Ajụjụ: naanị iji mee ka akọ na uche nke ndị isi ojii / ndị Africa ghara iteta, gịnị kpatara na mgbe enwere ogbugbu mmadụ n'Africa, (ndị nwụrụ anwụ dị), mana mgbe anyị na-ekwu maka nyocha ahụ ọtụtụ oge, anyị anaghị ewere ya na oke ọ bụrụ na enwere ndị ọcha (ndị a na-akpọ ndị ọdịda anyanwụ) ndị nwụrụ n'etiti ogbugbu ahụ?
Egwu Afirika "Hausa" sitere na Niger na uda India: nke a kpatara eji akpọ ya "Hindu - Afrịka" Afrịka, kọntinenti na-agaghị ekwe omume ... (VIDEO)
Nwa ojii / ndi Africa: uru nke ịbụ eze nwanyị "are bụghị nwanyị nwanyị n'ihi na ị tetara n'otu n'ime ụtụtụ ụtụtụ wee kpebie ịkpọ onwe gị eze nwanyị"
Ọ bụrụ na anyị ga-aba n’eluigwe ma anyị ejirila ndị ojii / ndị Africa niile ndụ ha niile dị ka ndị dị ala?
Ihe ngosi a gosiputara nke oma alaeze nke Africa n'oge ochie, n'ihi na tupu anyi ekwughi, kama ala eze… (VIDEO)
Mma English / Jamaican: anya bụ enyo nke mkpụrụ obi; gụọ anya m, ị ga - ahụkwa mmetụta niile m nwere n’ebe ị nọ: ịpụ gị nke ọ dịka dịka ilele oge nke Titanic nke abụọ nwere olile anya na ụgbọ mmiri ahụ anaghị ekpu.
Ndị ụjọ, ndị na-adịghị ike, ndị mmeri, mana ndị amaghị ihe na-eme (kedu)? Jọ anaghị ebido; ndị adịghị ike anaghị akwụsị akwụsị; onye meriri emeri adịghị ada mba
Arụmụka: uru nke nwanyị "Ọtụtụ ụmụ nwoke na-eme ka a ga - asị na ha na - enyere nwanyị ahụ nnukwu aka site n'ịgwa ya ka ọ lụọ" Ka anyị tụgharịa uche n'okwu a:
Otu egwu si Colombia sonyere Daniela Morelo: onye na-eme ihe nkiri M'bilia Bel, na YAMBA NGA… (VIDEO)
Gini bu Africa tupu obia ndi Arab na ndi Europe no n’ala ya? "Gịnị bụ Africa ?? "
Otu Colombian weghaara "Ndị ọrụ" sitere na otu egwu egwu Musica: icalzọ egwu ndị Congo bụ n'ezie mba ofesi ... (VIDEO)
Nwanyị bụ eriri nke na-ejide uwe ogologo ọkpa nwoke ahụ “ka ọ dị mma ma ka ọ dị njọ”: ọ dị mma ịlụ di ma ọ bụ nwunye ebe ihe kachasị njọ na-aga n'ihu?
Ndi oji ojii n’Afrika / ndi Africa amaghi ihe banyere mgbe ochie anyi amaghi: nke puru iche ndi pan-Afrika nwere ike igosi gi aha onye oji isi ojii nke ndi Black / ndi Africa nke biri n’oge ochie, “Nke a na-agwa gị etu osilapụrụ anyị omenaala »
Arụmụka: kedu ihe bụ sọks nke skulls n'etiti Bamilekes? Ajuju ndi otu ndi Beninese nke ndi Voodoo na-eleta Bafang Chiefdom na njedebe ogbako nzuko a "Nzaghachi si n'aka onye isi Bafang, Onye nwe ya Eze Kamga (Eze nke Bafang)"
Kwalite ọdịbendị ndị Togo: ọdịbendị bụ ihe mgbochi maka ime ihe ike, n'ihi na ọ na-akpọ anyị ka anyị ghọta ndị ọzọ ma na-akwalite ndidi, site n'ịgba anyị ume izute ndị ọzọ n'echiche na ọdịbendị ndị ọzọ ... (VIDEO)
Mara mma dị mma anaghị agụta na mmekọrịta, mana gịnị ka ọ pụtara, "Ọ bụ omume" ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha? Ọ bụrụ na ọ na-eme omume ọma, ị ga-ehi ụra dị ka nwa ọhụrụ (ị ga-enwe nchebe mgbe niile)
Arụmụka: nwanyị dị ka ọdọ mmiri nke na-enweghị nsogbu ịchọpụta onye na-egwu mmiri n'ihu gị, onye ga-egwu mmiri mgbe ị na onye ga-egwu mmiri gị, yabụ kpoo oge igwu mmiri gị ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Nwa Black / African: ihe onyonyo n’ekwu maka onwe ya, “and ga adi ndu rue mgbe ebighi ebi - ya mere buru onwe gi”, a na-ewuli ulo ya elu na ima nma ya niile.
Black - Mma mara mma: mma nke nwoke mejuputara na mmuo ya, mmuo nke nwanyi mejuputara na nma ya "Mgbe otu okacha amara, nma na-agbaba n'ime"
Kpoo ihe ndi mmadu kwuru banyere gi? Ọ bụrụ na agwara gị na ị gbasighị ike, lụ ọgụ ọ bụla "Ọ bụrụ na agwara gị na ị pere mpe, nọgidesie ike"
Otu onye omenkà na-eto eto nke Kameruun nwere ikike na ụgbọala: site na Mokolo na ngalaba Mayo Tsanaga nke dị na mgbago mgbago ugwu Cameroon, Hamadou Houmarou Patouma… (VIDEO)
Arụmụka: onye ọ bụla maka onwe ya, onye ọ bụla nwere ikike ya, nke ahụ bụ ebumnuche nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị "Obi ụtọ na-amụ site na nleghara anya, enweghị obi ụtọ nke ịchọ ọdịmma onwe onye nanị" Onye na-adịghị eri na tebụl na-eri nri na anụ ... ... VIDEO)
African lullabies: lullabies abụghị nchekwa nke ndị ọcha nanị "Africa nwere ọtụtụ puku, ọbụna nde, ebe niile n'obodo nta anyị Africa" ​​... (VIDEO)
Mma Seychellois: Christine Barbier Miss World Seychelles 2016 "Mma bụ ịdị n'otu, usoro, nkwekọ"
Kedu mgbe ohu ahụ ghọrọ onye na-eme ihe nkiri? Verygba ohu abụghị ihe a na-apụghị izere ezere "Ọ bụrụ na ọ mara, ohu ahụ nwere ike inwere onwe ya n'ọnọdụ ya wee bụrụ onye omee na akụkọ ntolite"
Ebee ka ihe nkiri nke Africa biri: ihe nkiri Africa biri na ọkwa nke ụbụrụ "Dị ka sistemụ kọmputa, a na-eme sọftụwịa ụbụrụ Africa n'ụdị iji kwere na (ihe niile) ihe. na-abịa site na ebe ọzọ, na ịkpọ asị (ihe niile) nke nwere ike ichetara ya ihe ọ mere, mara ụdị onye ọ bụ na ụkpụrụ ya "
Arụmụka: Jizọs Kraịst ghara ụgha (Matiu 10 34) “Ekwerela na m bịara iweta udo n'ụwa; Abịaghị m iweta udo, kama ọ bụ mma agha ”
Ọ bụ nrọ nke (KL): abụ a bụ nke a raara nye ndị niile gwara m na m gaghị aga ebe ahụ na ndị niile na-achị ọchị maka iwu m nke asụsụ French ... (VIDO) )
Blackma ojii / nke Africa: ịbụ ma ọ bụ inwe obiọma bụ ngosipụta nke ime onwe onye ọbụna tupu ihe dị iche nke ndị ọzọ "Mma bụ ụdị ngosipụta nke njirimara siri ike"
Onweghị ihe dị ndụ kwere na nkwa ma ọ bụghị ọnwụ: ịnwe ya ka abaghị uru ọ bụla dị na njedebe nke mbọ… (VIDEO)
Echiche na-ezighi ezi banyere udo: agha agaghị enweta udo, Udo ga-esite n’ịhụnanya “Chee echiche ọzọ” kindsdị nkwupụta ndị a sitere na nghọtahie banyere udo "Gini mere iji belata ihe nchebe gị nke ike eke? "
Arụmụka: ezigbo nwanyị nke nwere ọnụ ahịa bụ onye na-anaghị agba ọsọ mgbe nsogbu dakwasịrị di ya "Eziokwu ka ọ bụ segha? »Be lụọ di ma ọ bụ nwunye bụ ịchọta na ihe ọzọ ị na-abụghị, na ịhapụ ịhapụ imecha ya
Naanị Chineke ga-ekpe ikpe KongoLisolo : KONGO: putara "Ihunanya, spain nke mmadu" & LISOLO: putara "Kpaa nkata" ya mere ka anyi kwuo ndi Black / Ndi Africa ... (VIDEO)
Nwa ojii / nke Africa: nwanyị m hụrụ n’anya bụ naanị ìhè, ọ bụ onye ahọpụtara n’ime obi m, eze nwaanyị nke obi m, “Ndị ọzọ”
Foto ikpeazụ nke Bob Marley tupu ọnwụ ya: nke a bụ foto ikpeazụ amaara amaara site na akụkọ banyere reggae Bob Marley tupu ọ nwụọ n'ọrịa cancer na May 11, 1981… (VIDIO)
Ajụjụ nye ndị ahụ nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme nke Cameroon "Akụkọ ihe mere eme na-enyere anyị aka ịghọta ihe dị ugbu a ma chee ọdịnihu"
Lee ndị isi oche Ahmadou Ahidjo na George Pompidou na ụgbọ oloko regifercam nke Cameroon na 1971: ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ n'ezie, afọ 48 ka nke ahụ gasịrị, ụgbọ oloko ahụ enweghị ike ibufee sub-prefect
Arụmụka: "Mmekọrịta Na Cameroon" Alụmdi na nwunye bụ njikọ iwu nke nwoke na nwanyị, mana ebe ọ bụ na mmekọ abụọ ahụ si n’ezinụlọ abụọ dị iche, enwere ihe ị ga-achọ ikwu , na mmekọrịta ahụ kwesịrị ka emezie ya… (VIDEO)
Nkọwa mara mma nke gosipụtara na obere ihe a (Ivorian) nwere olu mara mma "Ntughari ekwesighi ịbụ eziokwu karịa ụgha, ọ kwesịrị ịbụ eziokwu" Ọ bụ eziokwu? … (VIDIO)
Mma Black / African: naanị ndị ndị ịhụnanya ha wakporola obi maara asụsụ nzuzo nke anya "A na-eme nwanyị mara mma dabere na nkwanye ugwu na agụmakwụkwọ, ọ bụghị na ntọala na ikiri ụkwụ"
Ọ bụrụ n'ịhụnanya bụ ụlọ akwụkwọ, gịnị ga - abụ isi ihe ị ga - ekwu ebe ị ga - eche mgbe niile? Na gịnị kpatara okwu a ??
Arụmụka: ọ bụrụ na ị hụrụ mmadụ n'anya, agwala ha ihe ha ga-eche, kama mee ka ha jụọ ajụjụ kwesịrị ekwesị, ebe ọ bụ na n'agbanyeghị ajụjụ "azịza azịza ya na-apụ iche"
Brothermụnna nwoke na nwanne nwanyị ekwesịghị ileghara ohere iji lelee vidio a dị mkpirikpi: "Anyị wuru nke a" Ọ dị omimi ... (VIDEO)
Nwa ojii / nke Africa: bụ naanị otu ihe mara mma n'ụwa bụ nke dị mma na enweghị asọmpi "Ọ dịghị ihe dị ụsọ karịa ihe pụrụ iche"
Na-arụ ọrụ ugbu a, olileanya maka ọdịnihu: Blackmụ nwanyị ojii / ndị Africa bụ ọdịnihu Africa ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Mma Barbaden: Chukwu bu onye okike nke elu-igwe & ego bu nna ukwu nke uwa "Onye nwere ego, anyi n’ele ya anya, onye n’enweghi ihe obula bu anumanu”
N'afọ 1986, mgbe egwu bọọlụ na Abidjan, Ivory Coast, onye na-eme nri America bụ LL Cool J, gbara afọ iri abụọ, gara n'obodo akpọrọ "Balnéaire de Grand Bassam" ebe ndị obodo kpọrọ ya "Chef- Kouassi Achi Brou »
Arụmụka: nwanyị dị ka udo, ị ga - alụ ọgụ ka ọ nwee… Eziokwu ka ọ bụ Falgha? Ọ bụrụ na ịlụ ọgụ maka ihe ị chọrọ, akwala akwa maka ihe ị furu efu
Onweghi onye ga-emere gị ihe ị ga - emere onwe gị: "Nnwere onwe na - enwe ọnụ ahịa mgbe niile," ọnụahịa mbara igwe na nke ahụ; imirikiti ndị isi ojii / ndị Africa anaghị achọ ịkwụ ọnụahịa a ... (VIDEO)
Ursula Burns: bụ onye isi ala na onye isi ya na ụlọ ọrụ Xerox "afọ 54, amụrụ na New York, ọ nọwo n'isi onye isi ụlọ ọrụ ahụ kemgbe 2009, ọ bụkwa nwanyị mbụ Black / Africa nke nwere ọnọdụ a n'ụlọ"
Arụmụka: Afrịka ga - ewepụ onwe ya na oge ọchịchị ya n'oge gara aga? Mgbe Onye isi ojii / nke Africa jiri nkwanye ugwu nye ndi isi ojii / ndi Africa, Onweghi onye ga agaghari na ndi isi ojii / ndi Africa
Mara mma nke Lesotho: Rethabile Anacletta Tsosane Miss World Lesotho 2016
Ikike nnochita anya bu ihe igha n’iru: ndi n’adi n’akuku gi n’oge oghachu gi bu ndi kwesiri iso gi nọrọ n’oge ogha n’iru, “ihe iga n’iru nwere otutu ndi enyi”
Ndụ abụghị maka ichere ka oke mmiri gafee, ọ bụ ịmụ maka etu esi agba egwu mmiri mmiri: ndụ jupụtara n'ogwu karịa okooko osisi.
Ihe a mere na Rio na Brazil (Egwuregwu Olympic 2016): nwa agbọghọ a na-acha ọcha tụrụ anya ịhụ ntutu ntutu nkịtị nke nwa nwanyị ojii Black / Africa mara mma.
Arụmụka: onye nwe mmadụ? Su kupụrụ ara mama gị ruo afọ 1 ruo afọ abụọ, ọ nweghịkwa ihe i meere ya, kama ị kuuru ara nwa gị nwanyị na-enweghị mmiri izu 2 ruo izu abụọ wee zụta ya ụgbọala.
Nwa ojii / ndi Africa: "Ezi ihunanya", ihunanya adighi adi nkpe, edeghi ihunanya na akwukwo, maka na enwere ike ihichapu ya; Edebereghị ịhụnanya n’elu nkume; n'ihi na enwere ike imebi ya, mana ezi ịhụnanya ka edere n’obi ya, ọ ga-adịgide rue mgbe ebighi-ebi ... (VIDEO)
Mma Kongo: Blackmụ nwanyị ojii / ndị Africa bụ ụmụ nwanyị kachasị mara mma n'ụwa "Ka Chineke nke ndị nna nna anyị gọzie Africa"
Ọ bụ ihe ziri ezi na nwoke ga-anara ọrụ, nwanyị dị ime ya na nwoke ọzọ? Ee ma ọ bụ Mba na gịnị kpatara ??
Onwere ihe doro anya na enwetara uru nke onye ozo dika nke ozo, "N'uzo ozo": ma oburu na anya ndi isi ojii / ndi Africa n’egwuregwu ndi Black / ndi Africa bu ezi obi, nkwanye ugwu, nwere olu (Onodu ndi mmadu, onodu aku na uba, ezinụlọ, omenaala; Ect)
Ihe nzuzo na odidi nsọ nke itule: itu ime, nke bu nkwadebe maka abia mmadu n’uwa, di oke nkpa nke na odi nkpa ikwu banyere ya n’Afrika.
Emezighi emezi nke oma ndi ezi na nwunye n’Afrika: n’etiti ndi isi ojii / nke ndi Africa, onye obula n’eme ka nwa agbogho a buru ezigbo nwunye nye di ha n’abia, ma obu onye n’achicha nkuzi nwata nwoke na ime ya nwoke di mara nma ma obu di nro nwunye nke odi ya?
Arụmụka: ịtụrụ ime dị oke njọ, mana ọ bụghị nnukwu nsogbu "Gini mere anyị ejichiri nwanyị dị ime n'etiti ndị Afrịka?" »A nabatara onyinye gị
Mgbe ị na-atụghị ndị gị ụjọ: ọ na-enye nke a gị? Ọ bụrụgodị na ụgbọ ala ha agbajie, ụjọ agaghị atụ ha ịga ije, ụjọ ịtụghị ọsọ, ma ọ bụ tụọ ụjọ ịkwọ mmiri n'ihi na ha niile nwere ihe jikọrọ "Ijere ndị mmadụ ozi"
Ọ bụrụhaala na ndị isi ojii / ndị Africa amaghị akụkọ ihe mere eme ha, ha ga-anọgide na-edo onwe ha n'okpuru: ọ bụ naanị site na ihe ọmụma banyere akụkọ ihe mere eme anyị na ịdị ukwuu nke ọtụtụ ndị nna nna anyị ochie "Ijipt oge ochie, bụ mmepe mmepe nke Black-Africa" … (VIDEO)
Ọdịnala m, ọdịnala m, nke a bụ okpukpe m: Ekwesighi m ikwere na ndị nna nna m biri, amatara m ya, ọnụnọ m bụ ihe akaebe na ha dịrị, anyị ekwesịghị inwe okwukwe. maka nke ahụ, ọ bụ eziokwu
Arụmụka: ntọala nke akụ na ụba na ike nke ọdịda anyanwụ - ikike ndị gbara ike ọchịchị ka bụ ikike dị ike "A na-akpọ ndị ọdịda anyanwụ ọgaranya na ike n'ihi akara Black / Africa" ​​... Eziokwu ka ọ bụ ?gha? ... (VIDIO)
Blackmara ojii bụ ọnọdụ nke uche, ụzọ ndụ na mkpu kachasị mma nke esitela n’igwe ojii pụta ogologo oge "Nmata uche bụ ọkụ nke ọgụgụ isi iji mata ọdịiche dị n’etiti ihe ọjọ"
Adị m onye isi ojii / onye Africa: mgbe ahụ, n'ezie, abụghị m nke chi nke Greek, n'ezie, a bughi m maka chi nke Latins, chi nke Arabia, nke Scandinavia na N'ezie, Anaghị m ekwesị ntụkwasị obi nye chi ụgha ndị ọzọ na-ekwekọghị n'okike
Anyị enweghị ike igbochi melanin na agba nke anụ ahụ mgbe anyị mara na melanin mara mma dịka ọ siri ike, mana ọ dị mwute ikwu na enwerela usoro nhazi, na-eme ka anyị kwenye na naanị melanin na-arụ ọrụ. ẹhu-eghughu anụ
Laghachi n'ibu onye omenkà nke Haitian “Rosy Cadet” nke eji egwu “Afrika ce akwụ nous”… (VIDEO)
Rwanda na-anabata ndị gbara ọsọ ndụ Libya na ókèala ya: ọ bụ ụnyaahụ mgbede (Tọzdee, Septemba 26, 2019), ka ìgwè mbụ nke ndị gbara ọsọ ndụ Libya agbabala n'ala Rwandan "Rwanda kwere nkwa ịnabata ha" Anyị na-agbaba. n'ihe anyị na-eleghara anya; anyị zobe n’ebe ahụ n’ihe anyị maara; ihe amaghi bu olile anya olile anya
Ndị isi ojii / ndị Africa agbaghị nkịtị na ọnwụ onye isi ala France bụ Jacques Chirac, mgbe akpọsara ozi ahụ, ha weghachitere ihe omume ahụ ozugbo ka ha wepụta uju ahụ ... (VIDEO) )
Arụmụka: nke dị ala - nje nke na - aga n'ihu na - a eatụ oke n'echiche nke Negroes gosipụtara na uche ya dị obere, ”
Ajụjụ nke ịchọ ịmata ihe: ọ bụ nka ọhụụ ọhụụ ọdịda anyanwụ ka ọ bụ amamihe nke ndị nna nna anyị ndị mere ihe ahụ?
Nwatakịrị (Black / African) na-ekpughere ọgụgụ isi ya nke enweghị atụ: nke a bụ ọmarịcha ụlọ, nke na-atụzigharị ụlọ, mgbe ọ gbasịrị otu narị afọ ọfụma, ọ naghị achọpụta, "Ọ bụ ezigbo nka ụlọ ọrụ"
Ekang - Omenala ndi Fang / Beti na-eto eto (ihe nlere na akwukwo nri): nke a bu oru omuma ndi isi ojii / ndi Africa "Egosiputa ndu anyi na udi aru"
Ikike icheta ihe: (Sept 11, 2001 - Sept 11, 2019) Tribute sitere n’aka onye isi ojii / onye Afrịka n’icheta ndị aka ha dị ọcha.
Arụmụka: Afrịka nwere onyinye dị ịtụnanya "Ihe ịtụnanya nka nka nke Afrịka" Afrịka abughi naanị ihe nkiti nke mmadụ, ọ bụkwa nke sayensị, nkà ihe ọmụma, ihe osise ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Blackmụ nwanyị ndị isi ojii / ndị Africa maara na idobe ntutu ha pụtara na ha kwekọrọ na okike? ... (VIDIO)
A na-akpọ South Sudan ịma mma: Nyakim Gatwech, a na-akpọ South Sudan "Nwanyị nke Ọchịchịrị" n'ihi oke ojii ojii ya "Ọ bụ onye America nke South Sudan si dị afọ 25"
Arụmụka na ilu: ịlụ di na nwunye bụ ihe megidere ndị nna nna anyị "'Onwe-ugwu na-ajụ ihe efu chọrọ inye, na ọmụrụ nwa na-asụ ude ka a manye irube isi"
Black / Africa mara mma: olee otu esi eme ka oge ọla edo nke Africa nke oge gara aga? Ezigbo ndị ojii / ndị Africa, cheta oge anyị bụ Ndị Eze na Queens nke ụwa a na taa, na mgbanwe ụfọdụ, agbanyeghị oge ọgba aghara ndị a, ọ bụ naanị anyị VIDEO (VIDEO)
Arụmụka na Ajụjụ: Ebee ka nsọpụrụ Mama Africa dị? Mgbe enweghi ike gbochie anyị, anyị na-arịọ mpako ịkwado anyị; nganga bu ugwu ndi n’enweghi
Dọkịta nwere nchekwube nwere nsonaazụ dị mma karịa dọkịta na-enweghị nchekwube: "Onye na-atụgharị uche na-ahụ ihe isi ike na ohere ọ bụla, onye nwere nchekwube na-ahụ ohere ọ bụla n'ihe isi ike ọ bụla"
Bes vs Yoda: Bes ma ọ bụ Bisu nke a na-akpọkwa Aha, bụ obere chi ochie nke Afrịka oge ochie bụ onye dịka chi siri ike bụ ma amamihe ma bụrụkwa onye mgba na-enweghị obi ike.
Blackcha ojii / nke Africa: ịdị n'otu na ọdịnala, "Ebumnuche nke ịdị n'otu abụghị ajụjụ gbasara agba agba, kama ọdịnala na ọdịnala, Agaghị m agbachitere Tibet ma ọ bụrụ na ndị Tibet enweghị ọnweghị ihe ga-eme na ọgụ m ”
Afrịka, naanị kọntinenti ebe ndị mmadụ metụtara na-asọpụrụ ndị gburu ha: ebe ọ bụla n'Africa, ọ nweghị ebe ma ọ bụ okporo ụzọ raara nye ebe nchekwa nke ndị mụrụ anyị ndị ohu
Ọ lụrụ Jizọs Kraịst: iji mee ka onye Negro-Africa hapụ omenala ya ma gbanwee n'okpukpe nke ndị na-agba ọchịchị mgba okpuru, Chọọchị ndị na-agba ọchịchị bidoro ịkụziri nke ahụ
Arụmụka: Chineke nke Chinese bụ Chinese, ọ na-asụ Chinese - Chineke nke Arab bụ Arabic, ọ na-asụ Arabic - Chineke nke Afrịka, ọ dabere na onye ọ bụla kpụzi ụbụrụ ya "Ọ bụ ihe niile, belụsọ Nwa "
Carsgbọ ala ndị na-enweghị loorọmọma enweghị mmerụ ahụ, atụla egwu ụgbọ oloko ahụ, kama tụọ egwu ụgbọ ala, n'ihi na ọ bụ isi ụgbọ oloko na-enye ụgbọ oloko zuru oke.
Ndị America na-agba ụta maka Jamaican: ruo ọtụtụ narị afọ, ndị America emeela ka akụkọ ifo ha dị ndụ, yabụ enwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ụwa na-eche na enweghị ike ịmegharị ihe onye America na ihe ọ bụla.
Egwuru egwu nke egwu "WHITE MAN'Z UWA" nke Tupac: White Man'z World (World nke White Man)… (VIDEO)
Shaka Zulu: Agwara m gị "eziokwu", mana naanị ị na-anụ olu m ma taa, ọ bụrụ na ịnụ olu m, emela ka obi gị sie ike, Ndi Black / Africa.
Agaghị m agbanwe ụwa, mana "M ga - eme, tụgharịa uche" ndị ga - eme nke ọma: ọrụ m bụ ịbụ karịa onye na - agụ egwú, ma ọ bụ ịrị elu nke ọgbọ nke taa ma ọ bụrụ nwere ike ime ya, gee ntị ... (VIDEO)
José Gabriel Túpac Amaru (Surimana, Canas, onye na-arụ ọrụ nke Peru, Machị 19, 1738 - Cuzco, Mee 18, 1781): mechara mara dịka Túpac Amaru II, bụ onye cacique India nke na 1780 na-eduzi ngagharị nnupụisi megide ndị ọbịa na Spain
Nwanne Rosetta Tharpe, "The God mama nke ROCK & ROLL": nwanyị ahụ mepụtara "ROCK'N'ROLL" Ogologo oge tupu Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard na ndị ọzọ bụ ndị ọsụ ụzọ Rock'n'Roll, nwanyị ụlọ ụka tọrọ ntọala nke ụdị egwu a nke gosipụtara ọkara nke abụọ nke narị afọ nke iri abụọ (VIDEO)
Afọ ole ka ị na-ahụ na foto a? "Ezi uwe agha onye ọ bụla bụ ihu ha"
Ọnọdụ ụmụ nwanyị nọ n'okike: dị ka onye theosopher Russia Helena Petrovena Blavatski (aha ya bụ Madame Blavatski), nwanyị bụ ọdịdị onwe ya na ọ bụ ọdịdị na-akuzi nwoke, ọ bụghị nke na-ezi nwoke ihe. Nature… Eziokwu Ka Igha?
Nwanyị bụ ogwugwu ikpeazu nke mba: na alaeze Kongo ikike nwoke nwechara ya, mana ụmụ nwanyị mere ihe ndị na --adịghị obere.
Arụmụka: iji hụ ogo omume obodo, lee ụmụ nwanyị ha "Anyị na-eme ihe niile iji bibie nwanyị Black / nwanyị Africa, ọ bụ ihe mwute"
Black / Africa beauty: nwa nwanyi, nwanyi nke mara - I ma nwanyi a nke na-enwekarị ike karia nna, ma obu nwanyị a nke na-ekweghi onwe ya? Ee, ọ bụ
N’egwunye alụm di na nwunye: “Nrọ nke ụmụ nwanyị niile bụ alụlụ” Ọ bụrụ na ndị West gwara anyị ka anyị yi akwa “Red” ma ọ bụ “Black” maka agbamakwụkwọ anyị kama iji uwe ọcha, anyị ga-aga ebe ahụ? 'na-anabata? Ee ma ọ bụ Mba na gịnị kpatara ??
Nwa Black / Africa: nwanyị Black / nwanyị Africa dị ịtụnanya, etinyere na chọkọleti, chara acha, mara mma, na-achagharị mma.
Mgbe ndị West ndị ọgaranya na-ezu ohi ndị Africa dara ogbenye, a na-akpọ ya Azụmaahịa ma mgbe ndị Africa dara ogbenye na-alụ ọgụ iji weghachite ngwongwo ha, a na-akpọ ime ihe ike: "Amamihe nzuzu bụ mmụọ nke uche na-adịghị ike"
A tụbara mkpu mkpu na obi Lumumba? Peoplefọdụ ndị mmadụ na-eche ma ndị Kongo (ndị Africa) na-ata ụma ịma akụkọ ihe mere eme ha ?? Ihere na-eme ndị Kongo maka ihe ha mere n’oge gara aga ?? Ma nke a bụ akụkọ ha, ha ga-enwerịrị ya
Ọ bụ ezinaụlọ nyere ya; agụmakwụkwọ bụ ọrụ dịịrị steeti: mgbe ihe niile na-aga nke ọma, anyị nwere ike ịtụkwasị ndị ọzọ obi, mgbe ihe niile dị njọ, anyị nwere ike ịdabere na ezinụlọ
Arụmụka: na Kongo na n’Africa n'ozuzu ya, nsogbu a abụghị onye isi ojii, ịkpa ókè agbụrụ, agbụrụ na ndị ọzọ, kama "Nwoke ahụ na-achọ ọdịmma onwe ya naanị" ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Gịnị bụ mma Black / Africa? Nkọwa anyị nke Black / African Mma na-amalite site n'echiche nke okike etinye n'ime nke ọ bụla, site na ebe ahụ na-ekpuchi omume, omume, omume, ebumnuche.
Will ga-amata eziokwu, eziokwu ahụ ga-emekwa ka ị nwere onwe gị: lee nkọwa nke mkpughe banyere ebo iri na abụọ nke Israel nke West na-emechi anya ya ugbu a.
Negroes bụ ndị agbachitere na antics: ihe ọ bụla sitere na ndị ọcha dị mma ị copyomi, ha na-egwu Jizọs nke akpọgidere n'obe, mana na-eleghara nhụjuanya nke ndị nna nna ha nwụrụ na ụgbọ ohu, n'ọhịa okpete na USA, pịa Afọ 400 nke ịgba ohu, egbuo n'oge ọchịchị, nke neocolonialism na-eti ihe
Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ; Onweghi onye na abiakute Nna ma obughi site na m Jisos Kraist (Jon 14: 1-12) "O mara nma nke ukwuu": Nke a bu ihe na - enye m nsogbu na nkuzi okpukperechi nke ndi Kraist “Mu, anam akpoku onye ahu ihe nzuzu”, Ndị Kraịst na-eme ihe m kpọrọ ịkpa oke na ịkpa ókè agbụrụ.
Arụmụka & Ajụjụ nke ịmata ihe? Onye n’enweghi mmekpa ahu ?? Nye nwetụbeghị ikpe na-ezighị ezi ?? Onye n’etula nkwuwa okwu? N'ụzọ ụfọdụ, onye ọ bụla n'ime anyị nwere ahụmịhe nke mmerụ ahụ anyị merụrụ
Ebee ka okwu Negro si? Okwu ahụ Negro yiri ka ọ pụtara naanị ihe dị ka narị afọ nke 15 dị ka ụmụ nwoke ruru eru ruru eru "Tupu narị afọ nke 15, na ọbụna ruo narị afọ nke 17, a na-ahọpụta ndị Africa dị ka Mores ma ọ bụ Moors (nke sitere na Latin Maurus onye putara ndi bi na Mauritania nke oge a) Ma obu ndi Etiopia ma obu Saracens "
Ekwela ka ihe na-esiri gị ike: maa mma, ma ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume onye ọhụụ, nwee ọtụtụ ihe ị na - eche, na ọtụtụ ihe okike, bụrụla onye omenkà nke ndụ gị, mgbe ahụ, nwee ọchị " ihe ndị ọzọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu ma lebara ha anya »
Blackma mma ojii / Afrịka mara mma: na ebido ya, mma ojii / ndị Africa dị ịtụnanya, naanị ebe a, "Ọ bụ nnukwu nlọghachi na eke"
Wiser abụghị onye ahụ na-adịgide, mana onye nwere ọgụgụ isi bụ onye na-eji ntụgharị uche nke ndị ọzọ na mgbanwe wee bụrụ nke kachasị mma: (naanị ndị oghe ga-aghọta asụsụ Solomọn)
South Africa: mkpochapu nke negroes dị ka Peter Botha "Usoro nke Peter Botha na ndị otu ya, ndị nọọsụ, ndị na-ere ọgwụ, ụmụ nwanyị ọcha na ndị ọcha megide ndị isi ojii na 80s"
Arụmụka: mgbaghara mmehie dị adị n'ezie? A gaghị agbaghara ụfọdụ mmejọ; ndị ọzọ bụ ndị na - enweghị mgbagha "A kụziiri anyị ịgbaghara, mana eziokwu banyere ibi ndụ mmerụ ahụ enweghị ike ichefu mmerụ ahụ mmadụ mere anyị ruo nke ịkpọ ya asị"
Nwa ojii / nke Africa: braids (akwa, eri, raffia, mkpọchi, wdg) abụghị naanị akụkụ nke ihe ịchọ mma nke Africa, kamakwa ha bụ ọrụ aka ndị Africa kemgbe oge ncheta.
Kedu ihe dị iche na “Ndoki” na “Nganga Nkisi? "Ọtụtụ mmadụ na-eche ihe dị iche na Ndoki na Nganga Nkisi
Funny, metamorphosis mmadu: Achọghi m izigharị ndị isi ojii niile na Africa, enwere ndị isi ojii na-adịghị mma ebe a na ọbụghị ma ọ ga-adị mma ebe ahụ.
Abụla nwanyị nke chọrọ nwoke inwe mmetụta nke ike, bụrụ nwanyị kwesịrị nwoke inwe mmetụta pụrụ iche, izu oke, na ọga
Arụmụka: gbasara ịta amoosu, "Gịnị bụ amoosu?" Ọ dị adị ?? Ta amoosu adịbeghị n'ụwa a, ọ bụ enweghị azịza n'ihu ụfọdụ ọnọdụ ụfọdụ ndị anaghị akọwa ma ọ bụ ịghọta
Ike nke ịdị nwayọ: ịnọ nwayọ dị ka nnụnụ, ọ bụrụ na i kwe ka ọ gbapụ, ị ga-enwe nsogbu ịchụkwudo na-ewepụ onwe ha n'ihi na ha ji nnukwu ike ha mee mkpa ha ”
Beyondgabiga ókè nsogbu ahụ ike: adịghị ike ma ọ bụ nka anyị enweghị abụghị ihe a na-apụghị izere ezere "Lee ihe atụ zuru oke nke na-egosi etu ọ ga-esi kwe omume ịgafe oke nke adịghị ike"
Arụmụka: Ezigbo nchekwube abụghị ndị ahụtụbeghị ahụhụ, kama ọ bụ ndị chere onwe ha nnukwu nsogbu ma merie ha site na echiche ọma ha banyere ndụ.
Mmalite nke mmadụ: ọdịdị kere mmadụ na njem na ọ mere na Afrịka, mgbe ahụ nwoke a hapụrụ Afrịka ka ọ gaa juputa ụwa ndị ọzọ "Ọ bụrụ na nwoke a ahapụghị l 'Africa, ndi mmadu ga-abu nkpuru ahia na nke ojii'
Mma ndi America n’ile: nma nke ndi isi ojii n’uche ya, na uche bu idi n’otu, usoro, nkwekorita
Mma Africa-American: ọ bụghị n’ụbọchị ị ghọrọ kpakpando, ndị ama ama anaghị esite n’ihe ọ bụla, ndị a ma ama anaghịkwa eme ihe ọ bụla. si ma obu njem ha ”
Nnu si n’Ebe Ugwu, ọla edo na-esikwa n’Ebe Ndịda abịa, ego si n’obodo ndị ọcha bịa, ma okwu Chukwu, ihe ndị amụtara, akụkọ mara mma na-achọta ya naanị na Tombouctou
Mma Kongo: site n’igosipụta ụcha anyị mgbe anyị nwara imebi anyị, ọ bụ idobe anyị nsọpụrụ “Ọ dịghị mkpa n’ enwu n’anya mmadụ niile ”Anyị na-anya isi n’ihi ọdịnala anyị na ọdịnala anyị; ha anaghịkwa akparita ụka
Samuel Eto'o homara nna ya iyi: I jidere m aka mgbe igosi m ụzọ m ga-eso, ị mere m nwoke m bụ taa, site n’ịgbasaara m ụkpụrụ nke ịhụnanya. , kekọrịta na ịrụ ọrụ
Jean-Pierre Adams, Senegal edu nsị bụ na a Coma ebe 1982: na Senegal player kemgbe March 17 1982, bụ aja a ọgwụ njehie n'oge a na ikpere na ime "Kemgbe ahụ, ọ bụ na a miri emi amaghị onwe ya" ... (VIDEO)
Arụmụka: ezigbo di na nwunye bụ di na nwunye nwere ịhụnanya 50%, ọbụbụenyi 30%, arụmụka 20% na ntụkwasị obi 100% ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Burkinabè mma: Nkwanye ugwu ugwu diri Gọvanọ Madame gọvanọ na mpaghara Central Plateau akpọrọ "Yaye Yat"
Arụmụka: n'etiti ihe onyonyo gị na akụkọ gị, kedu ihe ị na - achịkarị? Onye ọ bụla na-achịkwa ihe oyiyi ya na-achịkwa ùgwù onwe onye, ​​nkwanye ùgwù na mmepe onwe onye
Mma Africa: "Ahụrụ m n’anya ibi n’Africa" ​​Enweghị wig, akwa, wick, etemeete na lipstick "Ndụ eke"
Ihe nzuzo maka ịkawanye mma: ọtụtụ mmadụ anaghị aga n’ihu ma ọ bụ tufuo ókè ha n’ihi obi abụọ. Obi abụọ na-ahụ naanị ihe mgbochi, mana ntụkwasị obi na-eme ka o kwe omume imeri ya
Arụmụka: olee otu ị ga - esi hapụ onwe gị pụọ n'ike? Jọ bụ mmetụta adịghị mma, ọ bụ ezigbo ihe otiti na-emebi ihe dịka nke agha, iyi egwu na-emebi ndụ niile
Plema mma nke ugwu nke Africa enwere ike: nke a abụghị okwu nduhie mana ọ bụ ezigbo ọnọdụ, ndị Afrịka ọ bụ oge iji guzoro maka kọntinenti anyị, ka anyị kwụsị obere ihe, ka anyị lee eziokwu ahụ n'ihu n’ebe ọwụwa anyanwụ, ọdịda anyanwụ abụrụ ndị wakporo anyị na ndị anyị zuru
Mma Jabuuti: ịma mma bụ ihe akpọpụtara n’ime, ọ bụ steeti ike gị; ntụgharị uche ya na-apụtakarị n’anya gị, n’agbanyeghi na ihe ijuanya a abụghị ihe anụ ahụ
Ndụ bụ njem anyị na-enweta: ọ nweghị uru ọ bụla n'ịsọ ndụ, kama ịnụ ụtọ oge ọ bụla ma nwee ekele maka ọkwa nke ọ bụla, oge ga-esi ike na oge ọma.
Otu ilu Afrịka ochie kwenyere na nwoke nke jisiri ike na-atụgharị uche na ịghọta kpakpando bụ nwoke kpuru ìsì, n'ihi na ọ nweghị ike ihu ma ghọta ihe o nwere ugbu a - ya mere ọ na-egbu oge ya.
Nwa ojii ojii: ekike nwanyị site n'ụsọ osimiri nwoke ahụ, ma ọ bụ mee ka ọ ghara mmụọ ya, ma ọ bụdị ka azọda ya ma ọ bụ mejọọ ya ka edere ya n'akwụkwọ ụfọdụ. (VIDEO)
Arụmụka: ọ bụghị cellulite na-eme ka "Ezigbo Nwanyị", kama ọ bụ omume ya ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Arụmụka: ọ nweghị ihe dakwasịrị ya, maka ndị na-amaghị etu e si eji ejiji na Saudi (n’asụsụ Arabik), mana ọ bụ n’amaghị ya i traditionomi ọdịnala nna gị na nke eze obodo gị.
Anụmanụ Site Nature - Na-eche M Flow (1995): mgbe Hip Pop dị mma ma enwere naanị ụmụ nwanyị ojii na obere vidiyo: Lee ka o si dị mma… (VIDEO)
Ajuju na nyocha nke Ndeke Luka Yakongo Ọsọ ọsọ: kedu ihe Lamuka na-enweta na nzukọ n'ofe DRC, juputara? Anyị mechaa nzukọ ahụ, anyị ga-agbazi ma ọ bụ gbanwee nhoputa ndi mba ụwa nabatara?
Puerto Rican - American Mma: Onweghi Ihe Mbepụta Nke Zuru Ezu Na-enweghị Enweghi Mma N’ime ya Na-etinye ya “Mma nke Mkpụrụ Obi Na-agbasa Dị Ka Nnukwu Omume Na Mma nke Ahụ (J.Lo)
Ileba anya na ajụjụ banyere ịmata ihe na - adịchaghị njọ, ọkachasị ndị si Africa: gịnị kpatara ọ bụrụ na a negro, jiri foto na - acha ọcha, na - egosipụta ọmarịcha ọnụ na - agbasa ezé ya niile dị ka a ga - asị na ọ nọ n'akụkụ Chineke n'onwe ya?
Pata Pata bụ Afro-pop-agba egwú song ọtụtụ mba site South African na-agụ egwú Miriam Makeba "Pata Pata" na-otoro na Makeba na Jerry Ragovoy, ya kasị ewu ewu na ndekọ nke "Pata Pata" e dere na tọhapụrụ States STATES 1967 na ... (VIDEO)
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị Afrịka bụ ngwa agha na-egbu akụ nke ọdịnihu n’Afrịka ma na-akụzikwu anyị ịkpọasị
Iji debe ha nke ọma, ọ bụghị na nhazi nke nnwere onwe ha ka ụmụ nwoke na-ahụ obi ụtọ ha, kama na ike ha itinye onwe ha - nke mbụ - na ọkwa dị ala nke ndị otu nzukọ siri ike.
Obere ihe mara mma: mkpa iji na-abụ abụ eze Africa "Ịkpọlite ​​ọdịbendị eze na nke Afrika na egwu dị mkpa" ... (VIDIO)
Ogwe aka abụọ a na - enyeko ibe ha: ike adighi na ogwe aka, kama na obi ike, n’enweghi aka nri ma obu ogwe aka ekpe,
Kedu ihe ọ chọrọ iji wuo klaasị? Lee ndị isi ga-eleba anya n'ihu gị na klas nke ụlọ akwụkwọ dị na Kongo - Kinshasa, "Ọ bụ mgbanwe nke oge a"
Arụmụka: kedu ka ị ga-esi na-ebi ndụ ọma? Onye ọ bụla na-ekwu maka ndụ dị mma na-akọwaghị ihe ọ bụ kpọmkwem… (VIDEO)
Mma Africa: naanị mma (African) mma na-adọta ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha? … “Ọ bụghị ifuru osisi niile na-amị mkpụrụ”… (VIDEO)
Arụmụka: ọ bụ maka ndị Black / ndị Africa, naanị ịkwalite ọdịbendị nke ha "Ndị isi ojii / ndị Africa, ịkwesịrị ịkwalite ọdịbendị gị n'ụwa niile, ọ nweghị onye ọzọ ga-emere gị"
Alaeze Ukwu Bakuba 1987 show: Tribute ka Amena Omoyi Djamba na Jean-Baptiste Kabasele Yampanya utu aha (pepe Kalle), mgbe ụfọdụ, e dere dị ka pepe Kalle mụrụ na Congo - Kinshasa (na January 30 1951 28 na nwụrụ na August 1998) ... (VIDEO)
Mma Kongo: "Di na nwunye onye isi oche nke Congo" Anyị enweghị ike ịtụkwasị obi naanị na chi ga-eme nke ọma na ndụ; nke kariri, I gha aghaghi ime ka ogha n’iru gi gha ime nke oma
Anya lara anya, ezé lara ezé: mgbe ụfọdụ iwu mmegwara kwesịrị itinye n'ọrụ n'ọnọdụ ụfọdụ
Mụ agbọghọ ndị a mara mma: ọ mara mma nke ukwuu mgbe ụmụ agbọghọ ojii nke oge a anaghị anabata ụkpụrụ ịma mma, kama ịnabata nke ha ... (VIDEO)
Arụmụka: ànyị ga-achọ ịlụ di na nwunye? Ọtụtụ na-ele alụmdi na nwunye anya dị ka ihe ga-eweta ya n'onwe ya ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ya, ya na onye ọzọ biri, ma ọ bụrụ na ohere ịlụ ịlụ adịghị ebilite?
Nwa ojii: mgbe Chukwu mechara, ọ bụ nwanyị ojii, ka ọ bụ ka anyị kwuo naanị na ezi Chukwu bụ "nwanyị ojii" ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Ndị kwesịrị ka a kwanyere ugwu: a na-akwanyere ndị kwesịrị ya ugwu, ọ bụghị ndị na-arịọ maka ya
Ihe mbu nwoke n’elele n’ime nwanyi bu obi ya, ma eziokwu bu na ara ya di n’ihu obughi nmebi nwoke.
Nwanyi bu ike: nwanyi nwere ikike nke puru ime nke mebere ahu na idi ike adighi.
Mma Kongo: A na-ahighachi mma nke Congo naanị site na nke rose "Dị ka Mamie Tshamala dị ka rose nke anaghị ada ada"
Ihe ojoo nke ndi ezighi ezi: emegh ihe bu ezi okwu "Otutu n'ime ndi ekwenyeghi agwa ha choro ka ndi mmadu kpebie ha"
Ego: mgbọrọgwụ nke ọrịa niile; ego na-emebi ihe niile “Ezinụlọ, Enyị, ,hụnanya, wdg; mgbe itinye ego n'ime mmekọrịta gị, mmekọrịta a agaghị adịkwa ozugbo ”
Mma Haitian: Joséphine Baker, onye isi ojii ụwa nke mbụ nke kpakpando Haitian dị ole na ole "Anyị niile maara na Joséphine Baker bụ onye Haiti ma nwee nganga na ya" ... (VIDEO)
Igha ụgha nke amaokwu nke Akwụkwọ Nsọ "Ihe ọ bụla kwere onye kwere na Chineke nke Israel": amaokwu a bụ ụbọ akwara na-adọta Ndị Kraịst ka ọ gbaa b ụta nke Akwụkwọ Nsọ.
Mma ndi American-American: nne mara dị oke mma ma dị oke ọcha n’ihi anyị iji gosi ya n’okwu adịghị mma "Nwanyi nwa nwanyị Ali Ali"
Ebe des "Tougbanlin" dị na ngosi ihe mgbe ochie: lee foto a, ukwe ndị a dị nsọ nke narị afọ gara aga, anaghị ada ụda ruo mgbe onye isi hapụrụ obodo nke ụmụ nwoke soro Pantheon nke ndị nna nna anyị.
Iwu ego dika iwu Moses si di, ya na ulo nke taa dika nzuko nzuko gi n’enye aka: otu a ka Chineke nke Israel kwuru n’ Opupu 22: 16-17
Arụmụka: "Ndị mmadụ na-ekwukarị na" hashụnanya enweghị afọ, mana oke oke afọ na - abụ nsogbu, ọkachasị na agadi ... Eziokwu ka ọ bụ segha?
Ọcha ojii: ọ bụrụ na amatabeghị ụmụ nwanyị a Afro-Colombian, n'eziokwu site nbibi; iche na agba, ntutu, mba, wdg na ụbụrụ anyị
Nwanyi, nne anyi, nwunye anyi, kwanyere ya ugwu ugwu, ma oburu na nwanyi juputara na ihe ojoo, Chineke agaraghi edobe umu aka ya: nyefee umu nwanyi ojii nile nke uwa, kwanye ugwu ugwu nye ndi nwanyi.
Maachị na nessdị Ukwuu: "M maara mgbe niile na ekpuchitara m ịdị uku" Nọ naanị onwe gị na ndị mmadụ ga-ekulite gị
Mkparịta ụka: anyị na-akpata nsogbu anyị, onyinyo anyị na-ebu kwa ụbọchị na omume anyị na site na mgbasa ozi ... Ezi ma ọ bụ Ụgha?
Rajee Narinesingh, onye dibia bekee duhiere, mechara chọta ndị dọkịta ọ chọburu kemgbe, ya bụ: Dr. Dubrow na Dr. Nassif
Ncha, nke na-ekpuchi akpụkpọ ndị Africa, ị naghị eche na ọ dị egwu? Kedu ihe bụ echiche gị? Ọ dị mma na ụmụ nwanyị / ụmụ nwanyị Africa na-eji ụdị ngwaahịa a ?? ... (Na)
Mkparịta ụka: ụda diplọma na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya "N'ọtụtụ mba, diplọma yiri ka ọ na-eweghara ezi ihe ọmụma, ikike na ụkpụrụ nke onye na-ejide ya" Ma ọ bụ naanị akwụkwọ dị mfe ... (VIDIO)
Nwa ojii / ndi Africa: debe obi gi karia ihe ndi ozo, ha gha agha agha megide gi, ma ha agaghi agha gi ... (VIDEO)
Ajụjụ dị mkpa banyere njirimara "amnye ka m bụ?" "Enwere ọtụtụ mmadụ ndị mụ na ha enweghị ihe ọ bụla na-ekwu" Guadeloupeans "
Arụmụka: "Nabata nkatọ" You nweghị ike ịkwụsị ndị mmadụ ịkatọ gị, mana ị nwere ike ịkwụsị ịge ha ntị
Mma Guadeloupe: "Laghachila n'ogige atụrụ" Marie France Massembo chọpụtara ihe banyere ndị nna nna ya Kongo, maka ọdịnala ndị nna nna ochie chebere ... (VIDEO)
Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ị na-aga, ịnwere ike iwe ogologo oge iji rute ebe ahụ: taa, anyị na-ewere nche anwụ n'ihi na TV kwuru na mmiri ga-ezo "N'oge gara aga, anyị gaara lelee mbara igwe"
Kedu egwuregwu ụfọdụ ndị ọcha na-egwu? Mgbe ụfọdụ anaghị m aghọta ụfọdụ ndị ọcha. "Gịnị bụ ihe obi ụtọ na ọ ga-aga Africa ọtụtụ puku kilomita iji kuo nwa ma kpọtara ya n'ubi nku maka nnọkọ foto?" "
Nestlé bara ọgaranya na azu nke umu ndi Ivorian: Nchoputa nke nwoke site n'aka Karl Marx ka dikariri.
Arụmụka: ịkụziri ndị ntorobịa bụ ihe mmesi obi ike maka ndụ ka mma "Anyị na-achọ ụzọ ndụ nke eji elebara mmadụ niile anya dị ka ụmụ mmadụ nwere ọrụ" Site n'aka, Haile Sélassié I… (VIDEO)
Mkparita uka na ochichi onye kwuo uche ya na aka: Ada onye ochichi onye kwuo uche ya abughi iju mkparita uka "ochichi onye kwuo uche ya di ike ma oburu na nkparita uka na-adigide na obodo"
Kedụ ụdị ị ga - e whenomi mgbe ị dị ike? Ikwesiri imata otu esi ejikwa ike gi "O buru na i di ike, mee ihe ka i wee kwanyere gi ugwu dika omuma na udo nke asusu si di"
Ndị na-elekọta mmadụ nyere ndị otu nzuzu olu tupu ha kwuo okwu n'ụlọ mmanya mgbe mmanya mmanya na-emerụghị obodo ahụ.
Ohere nke ndụ: omenala anyị, nke a na-eṅomi mgbe nile n'adịghị mgbe e kwuru "Na mbụ, ha na-achị ọchị mgbe ahụ anyị hapụrụ ma jide ha"
Ezigbo ihe akara nke akara ngosi ya: Kambụ Kamit (African) anaghị akwalite echiche kewapụrụ echiche ma ọ bụ akara ọdịnala nke agbụrụ ndị ọzọ.
Thedị adị nke ụwa "Afrịka": "worldwa Africa" ​​dị adị, ozugbo ndị mmadụ kwuru onwe ha Afrịka ma ọ bụ "Kamit", ha na-agbali ime ụdị ihe ahụ.
Mma ojii nke Africa: ezigbo akọ na uche na-enye ọ beautyụ ọfulụ. "Mkpụrụ obi dị ka enyo ahụ ebe ọ bụ na ị jọrọ njọ, ị chọghị ịhụ onwe gị ọzọ"
Enwere afọ maka ịhụnanya? Nwatakịrị nwanyị Dominican kwuru na ya hụrụ nna nke okenye ihe karịrị afọ iri ise
Mmadu naenweghi ndi iro bu onye n’enweghi uru: onye n’adighi uru abughi onye iro (eze & ohu)
Mkparịta ụka: Ezigbo, ị na - eme ka ị na - eme ma ọ bụ megide alụmdi na nwunye dị ọcha (oji na ọcha)? Nye echiche gị. Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị ma ọ bụrụ na ọ bụghị, gịnị mere? ... Na-aga ... (Na)
Khoudia Diop: the "Melanin Goddess" Ọ mara mma, ọ dị oji, na agba oji nke na ụwa na-enwupụta na ntụgharị nke anụ ahụ. O ncha n’iru, dika a ga-asi na Chi nke zoro ezo nzuzo n’anya oji
Nwa ojii Africa: emetụla njirimara anyị aka, n'ihi na ọ bụ nsụhọ anyị ụnyaahụ, taa na echi. “Naanị ọbara, ezi na ụlọ, akụkọ ihe mere eme, oge, na-achọpụta mmadụ; ọbara bụ kaadị njirimara kasị mma ”
Nwa ojii na-acha ọcha ọcha: ndị isi ojii! Ruo mgbe olee mgbe anyị ga-anagide ire nke ọdịnala anyị?
Akwụkwọ ozi emeghere nye ụmụ-nwanyị niile ndị nwanyị Afrịka / ojii: gịnị kpatara ị ga-eji chọọ ka ọ chachaa n’elu isi wee bụrụ onye isi ojii site n’ihu ruo na mkpịsị ụkwụ? Ọ bụ ihe ihere n’ezie
Mkparịta ụka: Ọtụtụ ụmụ ojii na-ahọrọ ịkụziri ụmụ ha egwu na egwu, mana ha anaghị agụ ... Eziokwu ma ọ bụ Ụgha?
Ezigbo ịma mma nke Africa: King Njala (Chadwick Boseman) na Queen Nakia (Lupita Nyong'o) "Ọ bụ naanị onye nwere nnukwu mma n'ime ya na-ahụ ịma mma niile nke ụwa"
Mgbe mmadụ na-enwe mmekọrịta ịhụnanya, onye na-agbaghara ngwa-ngwa n’etiti nwoke na nwanyị?
Echela ka ndị ọzọ mata uru ị bara, n'ihi na nke a bụ aro na-ezighi ezi
Onye nwere elu na mkpuru obi na ele onwe ya anya karie mkparita uka a, ma gbaghara ha. "Ego ahụ rutere mgbe ohere ruru nkwadebe ahụ" ... Eziokwu ka ọ bụ segha?
Mkparịta ụka: ịgba alụkwaghịm n'enweghị ịga n'iru ọkàikpe ... "Nke a ọ bụ ezi echiche? Ndị MPs kwere ka ịgba alụkwaghịm site na nkwenye onwe ha n'enweghị onye ikpe, site na ịmegharị mgbanwe dịka akụkụ nke mmezi iwu
Lezienụ anya na unu, ndị isi ojii / ndị Africa, ndị sabo na-anọkarị gị nso: ebe a bụ ihe akaebe iji kwado ya
Africmụ Afrịka, bịa lee kapeeti ha kwafuru maka Alpha Condé na ,tali, ma mgbe ha bịarutere Africa, ị na-anabata ha dịka ha bụ chi, echefula na ha bụ otu ndị ahụ tara ahụhụ, gbuo ma gbuo. Ochie nna-gi-hà
Echetere m, nke ọma nke onye ọcha ahụ: lelee nke ọma na foto a, nne nwanyị a ji obi ọjọọ kewapụ ya na nwa ya wee resị onye na-agba ohu dị ka ehi: ee, Jizọs kwuru na anyị ga-agbaghara ma chefue ya. ọ bụrụ na ndị nwe ndị ohu a ọcha anaghị arịọ mgbaghara maka omume ha
Ọ bụrụ na ụfọdụ n’ime anyị matara na ndị nna nna anyị ochie amaala mmepe puku afọ anọ gara aga, ebe ọ bụ na ụmụ ha wuru Pyramid na ụlọ arụsị na mbara ụwa niile, ebe ndị ọzọ ka bi na mmiri ala. Caucasus
Anyị na-amata eziokwu site na arụmọrụ ya, site n'ike ya: "arụmọrụ otu ihe na - atọ ụtọ mgbe nyocha ya dị mfe nfe"
Ụdị ihu abụọ ndị a, nke ọ bụla n'ime ha na-eme ka anyị chịa ọchị, mee ka anyị chịa ọchị ọnụ site n'ile ha anya: Mbipụta mbụ na mbipụta nke iri na asaa, nke iri na asatọ na mmalite narị afọ nke iri na itoolu
Echiche mmadu bu odi ka mmadu, ma echiche mmadu bu aru nke ndi mmadu
Mkparịta ụka: Mgbe ọ bụla mba Africa na-azụta ngwá agha, ọ bụ megide Afrịka. Ọ bụghị megide European. Ọ bụghị megide obodo Asia ma ọ bụ nke Amerika ... Ezi ma ọ bụ Ụgha?
Gini mere onye isi ojii / ndi Africa jiri kwere ka ha buru Christian? Azụmaahịa ohu Europe dị na Afrịka: ihe dị ka nde ndị Afrịka 200 ruo 400 (ndị nwụrụ anwụ ma ọ bụ ndị a chụpụrụ) na America "Mpụ megide mmadụ"
Ekwenyekwala n'echiche onye isi ojii maka ajụjụ ojii, ọ bụrụ na ọ lụrụ nwanyị ọcha: "Ndị isi ojii bụ ndị ụjọ dịka onweghị ndị ọzọ" ... (VIDEO)
Complexdị ojii dị ala dị omimi, na onye ọcha adịghị ọnụ ahịa ugboro 100 karịa nwa ojii, (n'ihi na maka isi ojii n'uche ya "Eziokwu bụ nke onye ọcha") ... Nwere ike ị ga-ahụ oke ọkwa ọmụmụ nke negro / onye Africa?
Arụmụka: Gburugburu ụwa, na-enweghị Africa, Europe gị abaghị uru ọ bụla ... Eziokwu ka ọ bụ segha? N’ikwu eziokwu, ike gwụrụ m maka etu anyị si akpọ ndị otu France (Les Bleus). "Blu Blanc Rouge"
Ikpe na-ezighi ezi nke ndụ (ọdịdị): uwa ekepụtala iche, mana mmadụ emeela ihe n ’enweghị isi
Artist, Oresegun Olumide: Enwere m mmasị, ana m ekele ya ma kwanyere talent ya ùgwù, "Anyị gaara ekwu n'ezie foto" ... (VIDEO)
Arụmụka: Ànyị bụ Ndị Kraịst tupu ọbịbịa ndị ozi ala ọzọ ọcha n’ala anyị dị n’Afrịka na Ọstrelia?
Mma Kongo: "Nengua Moseka La Voix" Anyị jikọtara ọnụ iche echiche, ịdị jụụ, ịhụnanya na ịba ụba, anyị ji kpọrọ ihe anyị nwere na ihe ndị anyị enweghị.
Osisi mango, enweghi ike itolite site n'igbu ahihia banana, obu oru ayi ichebe mgbidi anyi ... Eziokwu ma obu Ụgha?
Ndị Europe na ndị America chọrọ ịchụ ndị Afrịka na Europe na America, mana (ịzọkwa) ịchụ ndị akụrụngwa Africa ha zuru
Arụmụka: Ndị West gburu ụmụaka abụọ a si Afrịka maka na ha rọrọ nrọ na kọntinent ha:
Mma Ivorian: ekele gị nne, nwanne, enyi "Bouanay Djakah" maka ihe niile ọ na-emere anyị site na vidiyo ndị a "Ndụmọdụ, nkuzi na agbamume ọ na-enye anyị"
I nweghi ike ime otu ihe ahụ ugboro abụọ; oge nke abụọ abụghịzi mmejọ, ọ bụ oke nhọrọ… "Ọ bụrụ na ị na-eme ihe ị na-eme kemgbe, ị ga-enweta ihe ị nwetara mgbe niile"
Mma Kenya: Agaghị m agbanwe akpụkpọ m maka ihe ọ bụla n'ụwa a ma ọ bụrụ na m ga-alọghachi na ndụ ọzọ, aga m ahọrọ anụ ojii mgbe niile "Site na, Olivia Sang" ... (VIDEO)
Afrika na anwu n’onwu, mana o na eri nri uwa nile: “Nnukwu mmeri ndi iro nke Africa bu ime ka ndi sabo n’agha na isi ochichi nke Africa, mgbe ha wepuchara ndi isi ochichi ndi choro. zụlite kọntinent a "
Arụmụka: ọdịiche dị n'etiti ndị 'Anglo na Franco' abụọ bụ Afrịka Anglo Kenyatta, Onye isi ala Kenya mepere ụlọ ọrụ ọgbakọ ndị German, "Volkswagen Limited" n'obodo Thika, nke na-arụ ọrụ injinia Kenya 2.500.
Gịnị mere ndị ọcha ji bụrụ SATAN mgbe niile dịka nwa nwoke? ... ọbụna ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ndị nwoke na ụmụnna anyị ndị nwoke na-ahụ maka nke ọma kwenyesiri ike na Setan bụ agbụrụ ojii, ebe anyị na-ahụ ndị na-acha ọcha, ndị enyemaka anyị na-enyerekarị aka
Ihe mara mma nke Cayman Islands: Monyque Roshel Brooks Miss World Cayman Islands 2016 ... (Age: 25 afọ & Size: 1m80)
Ọbụlagodi na ndị ezute ohere bụ n'ihi mmekọrịta nke emere na ndụ gara aga… Ihe niile “Karma” kpebisiri ike, ọbụlagodi ihe ndị pere mpe, ohere adịghị adị
Jacob Zuma: na Nigeria dị ka akpụrụ akpụ, na South Africa n'ụgbọ mmiri… Ya mere ndụ na-aga, ọ na-ada ma ọ bụ ihe mmụta dị mma maka ndị ọzọ
Anyị na-achọta nke mbụ metụtara condom ka 1350 BC na Egypt condom mere atụrụ nsia membranes, isi eji megide na-efe efe ... The condom ahụ esịnede acha ọcha, tinye ke olive mmanụ
Ndị nna nna anyị siri ike “Lee Fero” nke malitere n’ihe karịrị afọ 3000, taa anyị nwere ili ya na ozu ya ka dị… Ma olee ebe aru (nke Abraham, Aịsak, Jekọb, Paul, Paul) , Jesus, Muhammad, Peter, Aisaia, Jọn Baptist, John, wdg) ebe anyị nwere ike ịchọta ahụ ha ma ọ bụ ili ha?
Ndụ bụ ule kachasị sie ike: ọtụtụ na-ada n'ihi na ha na-anwale i othersomi ndị ọzọ n'amaghị na ọ bụghị mmadụ niile nwere otu ajụjụ
Arụmụka: ịgaghị ahụ nwanyị ọcha ka ya na nwoke isi ojii na-enweghị ọdịnihu, mana ị ga - ahụ ndị isi ojii nwere ọdịnihu, soro ndị inyom ọcha na - enweghị ihe ọ bụla… Eziokwu ka ọ bụ Falgha?
Igwu Afro-Amerịka: ị nwere ike imebi ebe nchekwa ahụ na okwu, ma ọ bụghị ịma mma nke ebe nchekwa a ... "Nwa nke Notorious Big"
Onye mmeri ịkụ ọkpọ na ụwa "Manny Pacquiao" na ọnụ ahịa ya ruru $ 190 nde arụala ụlọ Filipinos ogbenye, mana "Mayweather" nwere nde $ 1.000, enweghị ike ịrụ otu ụlọ mposi ebe o toro ... " Naanị ihe ọ ga - eme bụ ịzụta ọla, ụgbọ ala, nke kachasị, na - emefu ụmụ nwanyị ”
Arụmụka: gịnị kpatara mgbịrịgba agbamakwụkwọ na mkpịsị aka nke anọ (mkpịsị aka mgbaaka)?
Nwa oji, mma mara nma: o mara mma, anya ya na cheekbones bu ihe itunanya, a na m aju ma o sitere n’Afrika.
Nwoke kwesiri inye nwunye ya ego eji eme ego ka ọ na aru oru?
Arụmụka: mmiri, olee otu ị ga-esi nweta mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, ma ọ dịkarịa ala na ọnụ ọgụgụ kacha ukwuu na Africa? Onye nyocha nke Tanzania ka meriri nweta ihe nmuta ohuru nke ndi Africa nke Royal British Academy of Engineering nyere, maka ibupute usoro nzacha tinyere nanoparticles… (VIDEO)
Burundima mara mma nke Burundi: ọ dịghị mkpa ịchọpu akpụkpọ ma ọ bụ itinye kilos nke agba ka ọ maa mma; Nwa agbogho Burundi a na-eme ka anyi mata na obughi ihe gbagwojuru anya mara nma
Ndị nna nna anyị na-e alwaysomi oge niile, mana ọ dịghị mgbe ọ bụla: Maat - usoro mmekọrịta ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Africa oge ochie dabere n'usoro, nguzozi ụwa, ịha nhatanha, udo, eziokwu na ikpe ziri ezi
Oge mbu ndị Africa na kọntaktị: ebee ka ịkpa oke agbụrụ ojii dị n'ụwa niile si?
Arụmụka: ịhụnanya adịghị, mana enwere naanị ihe akaebe nke ịhụnanya ... Eziokwu ka ọ bụ segha? : Igosiputa di gi na ihuru nwunye gi n'anya; ì nwere ike ime nke ahụ ?? … Dị ka nwata nwoke a ???
African beauty: nwanyi Afrika nke di oji gbara ochi a, obughi nwanyi mara nma n'uwa? ... ọ bụ, ojii gbara ọchịchịrị
African American Beauty: "The aka Serena Jameka Williams na Wimbledon," Serena bụ American tennis player mụrụ September 26 1981 na Saginaw ... "A ezigbo fighter & a oké mmeri, Serena nkwanye ùgwù"
Naanị nlele nwere ike ịmepụta mbara igwe: mkpụrụ obi ọ bụla na-anọchite anya ya, eluigwe na ụwa niile
Mkparịta ụka: arụmụka a bụ maka ụmụ nwanyị ... "Ọ dịghị ma e wezụga ụmụ nwanyị" ... Ụmụ nwanyị, ị bụ maka otu nwanyị?
Beautyma mma nke ndi Africa bu nkpuru mara nma: o nwere ahihia n’ebe nile, mana o na achapu di ka odika ndi di.
Ekwere m na ndụ mgbe mmadụ nwụrụ, naanị maka na ike agaghị anwụ; Ọ na-agbagharị, na-agbanwe ma na-akwụsị akwụsị
Ọ bụ naanị ọrụ na-akwụ MICHELLE EKURE, ọmarịcha ndị Nigeria a gụsịrị akwụkwọ na ndị na-enweghị ọrụ, bụ onye bidoro akwa akpụkpọ ụkwụ ma taa, ọ na-emepụta ụdị akpụkpọ ụkwụ nke ya ... Ọ dị ka "Mere-in-Italy"
Mkparịta ụka: arụmụka a bụ maka mmadụ ... "Ọ dịghị ma e wezụga mmadụ" ... Ụmụ nwoke, ị ga-ekwenye na nwa gị nwanyị lụrụ nwoke nwere mmekọahụ?
Beyoncé na Africa, nnukwu njiri mara: nkwenkwe ụgha nke America jụrụ maka nkwalite ya, onyonyo nke ihe nkiri Senegalese "Touki Bouki" na-akọpụtaghị isi mmalite ya, ma ọ bụ na-emegharị aka na onye na-erite uru ... Ma ọ bụrụ na ịgba akwụkwọ site na ihe nketa ọdịbendị Africa dị ọtụtụ, onye na-ese ya anaghị eche naanị banyere ihe ndị dị na kọntinent ahụ
Arụmụka: ọ bụ ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịgwọ nwanyị mbụ dịka nke a? … Ọ bụ ihe ihere nye ndị Africa ahụ niile na-eche na France bụ enyi ha… “Chere ma hụ”
Mma nke Ivory Coast: mgbe niile dị ọcha, na-amụmụ ọnụ ọchị ma nwee omume enyi, ọ nwere ihe mmadụ chọrọ, ihe niile mara mma n'Africa… Ogologo oge Africa, Afrika na-ebi ogologo ndụ
Russia: Onye isi ala Vladimir Putin abụrụla otu n'ime ndị ndu kachasị ochie nke obodo na afọ 100 gara aga… Ahọpụtara ugboro anọ ka ọ bụrụ Onye isi ala nke Republic.
Ezigbo di nwanyi nwere ike inwe n ’ụwa,“ ọ bụ ọkà mmụta ihe ochie ”, n’ihi na okenye nwanyị ahụ, ka ọ bụrụ na nwoke nwere mmasị karị.
Mkparịta ụka: ebe dị n'Africa ... "A na-eme ịgba alụkwaghịm n'otu ụzọ ahụ dị ka alụmdi na nwunye & ọnụnọ ndị àmà mbụ bụ iwu" ... I chere na nke a nwere ike ịkụda ndị chọrọ ịgba alụkwaghịm aka?
Mma ndi Cameroon: Samuel Eto'o & Georgette Eto'o n'agbamakwụkwọ nke Leo & Anto… Nwa nwoke kwesiri Afrika, nwoke nke ekesara ma lebara ndi ya anya.
Kongo: Léopoldville 1928 - ụgbọ njem ọha nke mbụ n'okporo ụzọ… Akwụkwọ sitere na nkọwa nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na njem ụgbọ ala na Congo (ACTI), nke na-arụ ọrụ ụgbọ ala mbụ na isi obodo na February 1928
Mkparita uka: ihe omuma ihe ndi na eme na obodo anyi ... Na obodo ndi ozo
"Nrọ m" bu iteta na ndinyom abuo n ’ihe ndina m: onye ga - agwa m: ahuru m gi n’anya & onye ozo ga - agwa m: ahuru m gi nna
Nke a bụ ọrụ nke onyinye ndị Afrịka… "Inwe talent, ekwenyela na ị nwere ya; ọ bụkwa inwe okwukwe na onwe gị, n'ike nke gị"
Akọnuche nke mmadụ na-akụziri anyị na ọdịnala Kongo nke Africa na-ebilite n'ụgbọelu atọ dị iche iche n'otu oge:
Mma onye America bu Séréna Williams: tupu ma ugbua, dị ka ụmụ nwanyị niile, na ịma mma ha na-abawanye ka ha na-akawanye nká, ịma mma a na-ebelata obere oge ịhụ nsọ.
Ajuju di nkenke, ma otutu unu agha aghaghi agha agha:
Mma ndi Etiopia: Amuru n'Afrika site n’hunanya
Arụmụka: gịnị kpatara ndị ọdịda anyanwụ ji etinye ntọala agha ha na mba Africa? Mba Afrịka nwekwara ike ịwụnye ebe ndị agha ya na France, England, Australia, Canada, United States ma ọ bụ na China? … (VIDEO)
Onyinyo a apughi ibia site na obodo Africa na-asụ French; ọ bụghị n'ihi na mba ndị na-asụ French bụ ndị ọbịa, ndị nzuzu na Afrịka, ụmụ agbọghọ nọ na mba ndị na-asụ French nwere mmetụta French karịa nke ndị France.
Allmụ nwanyị niile na-eme nke ahụ? … Gwa nwunye gị (enyi gị nwanyị) kwa ụbọchị, lee ka ị si hụ ya nwanyị, ọ ga-eme nke ọma… Ma ụmụ nwoke ole na-eme ya?
Captain Irene Koki Mutungi, a makwaara dị ka Koki Mutungi, bụ ọkwọ ụgbọ ala ọkachamara na Kenya, akụ na ụba kachasị na East African Community. Ọ bụ nwanyị mbụ nọ n'Africa gbago ụgbọ elu Boeing 787. Ọ na-arụ ọrụ maka Kenya Airways, ụgbọelu mba Kenya
Mmiri ahụ na-asa gị ahụ, ego ahụ na - eme ka ị dị ọcha, mana enwere ndị na - enweghị ike iwepụsị mmerụ ha niile ... Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Achọrọ m visa ịbanye na mba 38 Afrika "na kọntinent m", nke pụtara na otu (American, French, English, Canadian ...) nwere ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji kesaa na kọntinent m karịa m
“Kalasiris” Mgbe amuru udi ejiji n’Afrika ogologo oge tupu: nkea bu otu n’ime uwe elu a na-akpo “Kalasiris” aha enyere uwe a kwesiri ekwesi nke ndi chi mgbe ochie & ndi n’enwe ya choro ikwere. na ha bụ ndị mepụtara ụdị a
Arụmarụ: gịnị kpatara na mgbe nwata mụrụ nwa ga-akwa akwa n costs ego niile ka anyị mara na ọ ga-ekwe omume
Malagasy beauty: Rodriguez Samantha Todivelou Miss Madagascar World 2016 ... Mgbe nwanyi nọ naanị ya, ọ na-ahụ naanị ya n'ụwa
Mkpụrụ obi bụ ike nke ahụ dị ndụ nwere, nke ahụ bụkwa njedebe maka ahụ ahụ
Humanmụ mmadụ bụ akụkụ nke ihe niile anyị na-akpọ "mbara igwe" bụ akụkụ amachiri na oge na oghere ... Ọ na-eche onwe ya, echiche ya na mmetụta ya dịka ihe dị iche na ndị ọzọ, ụdị. ngwa anya nro nke nsụhọ
Onye isi oche nke Mahadum Kentucky State ahọrọla ịbelata ụgwọ ọnwa ya site na $ 349 gaa $ 869 iji bulie ụgwọ ọrụ nke ndị ọrụ kachasị ụgwọ na mahadum ahụ.
Arụmụka: mkpụrụ edemede abụọ ahụ, ndị kasị egbu egbu (ọbara ọgbụgba) na akụkọ ihe mere eme na narị afọ nke 21… Otu n'ime ndị Europe gburu nde 10 na nde ndị Africa 15 ọzọ
Nrọ nke umuaka na eziokwu nke ndu… Enwere ndu abuo na ndu: (ma obu anyi rọrọ nrọ ma obu anyi mezuru ya)
Ọ bụghị ịma mma gị ga-eme ka ị banye n'alụmdi na nwunye, ma ọ bụghị na ọtụtụ ga-abụrịrị: ọ bụghị site na ọgụgụ isi gị, ọbụlagodi site na mmekọrịta gị na ị ga-aga nke ọma ... Ana m ekpe ekpere na mgbede a, ka ihu ọma nke Nzambé nke ndi nna nna anyi, soro gi ebe obula are no
Africa bu nani ndi mmadu kwenyere ka a na-achi achi, nke ndi mmadu juru na 21st Century. Ọ nakweere echiche nke ịbụ ike nke ikike ụfọdụ… Ọ bụ nke a mere mba ndị jiri klọọkụ anyị ji chee na anyị enweghị ike ịchị onwe anyị nakwa na ha ga-aga n'ihu na-achị anyị.
Arụmụka: dịka "onye ojii" Afrịka ... Nna nwere ike ịsa ahụ nwa ya nwanyị? … Ma ọ bụ nna nwere ike susuo nwa ya nwanyị ọnụ n'ọnụ ?? … Echiche gị biko
Ihe ndi Afrika di ala: onye isi ojii / onye Africa aghaghi ịmalite site na ịlụ ọgụ ara, nke nọgidesiri ike na ogologo oge, na ịkpọasị onwe onye
Mkparịta ụka: anyị nwere ike ịta ahụhụ na ọdachi ndị nna ochie anyị nwetara? ... Ahụhụ ndị nne ma ọ bụ nna na ndị nne na nna ochie hà na-ahụ ọ na-ahapụ ụmụ ha?
Ezi obi ike anaghị ada mba: ọ bụrụ na ụmụ nwanyị adaa ụwa, ụwa ga-adapụ iche ... Echefula ihe ọ bụla
Mkparịta ụka: Ndị nwere ihe ịga nke ọma nwere ihe abụọ n'egbugbere ọnụ ha, "na-amụmụ ọnụ ọchị" na-amụmụ ọnụ ọchị nwere ike idozi nsogbu na ịgbachi nkịtị nwere ike izere nsogbu ... Eziokwu ma ọ bụ Ụgha?
Ihe ọchị bụ naanị ngosipụta nke omume anyị na okwu anyị, izu oke nke foto ndị ahụ mejupụtara na oyiyi ahụ.
Umu ojoo na eso mmadu, agha nke nwere ezi uche maka echiche ... A na-akppo ụfọdụ ndi mmadu, ndi ozo bu ndi agha
Loika Dominguez (ada Adolphe Dominguez) ya na KOKO "Papa Wemba"
Kedu ihe okike kachasị njọ na nke kasị dị ize ndụ n'etiti ihe atọ ndị a 1 - 2 ma ọ bụ 3?
Ka nwoke na-emekwu agadi, ka Chineke chọkwuru ya ka ọ chebe ya ka ọ ghara iche na ihe niile
Na obodo ọ bụla, e nwere ụzọ abụọ dị iche iche: enwere echiche mmalite (nke ọgba aghara na ọgba aghara) & maatic bidoro (usoro na nkwekọ) ... Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ ndị na-emetụta mmụọ na-achị kachasị elu ma na-eme ihe niile. ka igbochi maatic amalite
Leghara egwu ịkwa emo, ụfọdụ ndị Negroes jisiri ike mee ihe banyere ọnọdụ ọdịda anyanwụ ruo n'ókè nke na ha bịara bụrụ ezigbo "ndị na-ahụ ihe ọgụgụ isi"
N'ọnọdụ ọ bụla, ịghasa onwe ha ... Ha chefuru na ha nwere uwe nwere “Black Power”; ha nwere mgbagwoju anya n’ezie
Mkparịta ụka: Adịla ọdụ maka nnukwu "ỤBỌCHỌ" karịsịa gị ugbu a ụmụ nwanyị oge a ... (Na)
Ọ ka mma iji merie ọ joyụ ya kama iwela obi mgbawa ... Ya mere jụọ onwe gị ihe na-eme gị obi ụtọ wee gaba n'ihu mee ya
Ngwurugwu nke ndi egwu egwu nke ndi Africa
Onye biri onwe ya na udo bi na uwa niile: "Mee oru gi dika ihe ikpe azu diri ndu gi"
Souvenir - 1981 Diego Armando Maradona: ndị Ivori nabatara ya na Félix-Houphouët-Boigny International Airport na Abidjan Port-Bouët
Ndụ anyị na-amalite ịkwụsị ụbọchị anyị na-agba nkịtị banyere ihe ndị dị oké njọ: ònye nwere ike ikwu ihe ọzọ? ... "Ọ dịghị onye" ... Ya mere, anyị ga-eti mkpu na ịkatọ ikpe na-ezighị ezi niile n'Ebe Ọdịda Anyanwụ
Site na ụwa na-ejide ụwa, nwanyị ahụ nwere ndụ na KongoLisolo »Na-ejide eziokwu ... Enwere m mmasị na foto a
Arụmụka: uwe loincloth, dị ka uwe ọdịnala ndị ọzọ, nwere ike ile anya dị ala & chic ... Nke a bụ ihe okike nke ụmụ nwanyị Africa "mara mma nke ukwuu"
Kedu amaokwu Bible gị maka ụbọchị? … (Abụ Ọma 34:19) Ọdachi na-abịarute onye ezi omume, mana “Nzambé” na-anapụta ya mgbe niile dịka m. KongoLisolo
Afrik ga-agbake ma ọ bụrụ na ụfọdụ ndị anyị akwụsị ịbụ ụlọ Negroes nke na-eme ihe ma na-emegide ndị anyị
Njem abalị nke Europoid: ọ bụ nke a mere a ga-eji chebe onye isi ojii na mkpokọta amnesia
Echekwala nwute ị mata mmadụ n’ime ndụ gị na INI gị ma ọ bụ n’ịhụnanya, n’ihi na ndị ọma na-enye gị Ọ HAụ
Ismụ mmadụ bụ otu ihe dị ịtụnanya: ọ bụ naanị ụdị nke na-eke oge na narị afọ, ọtụtụ narị afọ, afọ na ọnwa, ọnwa na izu, izu n'ime ụbọchị, ụbọchị n'ime awa, awa na nkeji na nkeji na sekọnd… Naanị ime ka ọ dị ka ọ nwere ike ịchị oge
Ndị ọcha (ndị ọdịda anyanwụ) ekwela ka ha kọwaa ndị isi dị ka ndị arụrụ arụ: ha kwudịrị na ha wetaara “mmepeanya” na Africa site na nchịkwa ọchịchị; mana doro anya (doro anya), akụkọ ihe mere eme, ihe ndị na-eme ugbu a na ihe mere eme na-egosi ihe dị iche
Mkparịta ụka: Mgbe mmadụ kwuru na ị "dị ọkụ," ọ na-ahụ ahụ gị; mgbe ọ na - ekwu na ị "mara mma," ọ na - ele anya gị, mgbe ọ na - ekwukwa na ị "mara mma," ọ na - ele obi gị ... Ezi ma ọ bụ Ụgha?
Mma Ivory Coast: Esther Emmanuelle Memel Miss World Ivory Coast 2016
Onye obula bu onye amamihe ... Ma oburu n’ikpe ikpe azu n’ikike ịrị ugwu, o gha eme ndu ya ikwere na nzuzu
Maka ndị n'ime anyị na-eche na anyị bụ ndị na-akpa ókè agbụrụ… ọ dị mma, ka ha lelee onyonyo abụọ a juputara na n'ikpeazụ, ha ga-aghọta
Arụmụka: nwanyị nwanyị Nigeria a na-ekwu na ụmụ nwanyị hapụrụ ndị di ha n'ihi na ha ghọgburu ha bụ ndị nzuzu na ndị nzuzu karịa ndị na-eche na ha hụrụ nwoke kwesịrị ntụkwasị obi ... will ga-anwụ na-alụghị di
Ndinam South Africa: ima nma bu okwu ndi na-adighi ike ... Ya mere, nwanyi n'amaghi ama maara nani okara ndu ... Eziokwu ma obu Ụgha?
Kedu ihe kpatara nwoke ga - eji me ihe nzuzu ihe mbụ anyị hụrụ bụ afụ ọnụ ya "nke malitere itolite (itolite)" ... Dịka ụmụ nwoke abụọ a na foto a ... (VIDEO)
Ekworo na-abụkarị nsogbu nchegbu maka ọchịchị aka ike n'ihe metụtara ịhụnanya
Anyị na-ada ima? ... (A) Anya Ma ọ bụ (B) Obi?
Foto a na-ekwu maka onwe ya: lee anya n'ụkwụ aka ekpe Zidane ka esi debe ya, ị gaghị ama ma ọ ga - aga aka ekpe ma ọ bụ aka nri
Anyi aghaghi ichota mmadu nile, n’agbal i ima ma o buru ocha, ma o bu oji, ma obu uhie; mgbe anyị tụlere mmekọrịta mmadụ na ibe ya dịka otu ezinụlọ, enweghi ike inwe ajụjụ ijikọ ma ọ bụ ịlụ nke agbụrụ… "Site na, Malcolm X"
Okpukpe bụ ụlọ mkpọrọ maka mmụọ gị: anyị bụ agbụrụ nke ndị ikom mbụ ... Ndị nna nna anyị echereghị "Abraham, Moses, Muhammad ma ọ bụ Jizọs" iji chọpụta oke eziokwu nke ndị ọzọ na-akpọ "Chineke"
N'afọ otu narị, ha ga-asị na m bụ onye ọcha ... Nke a ka ha mere Jizọs ... "Onye mmeri anyị karịrị onye na-eme egwuregwu"
Ugandanma Mma Uganda: Womenmụ nwanyị nwere mma mpụga bụ ihe n asomi, ndị nwere naanị mma ime bụ ihe atụ
Kedu akwụkwọ ozi mkpụrụedemede ị na-atụ aro ka ụgbọ ala a pụọ?
Ọtụtụ ụmụ nwoke na-eche na ha na-emere nwanyị ahụ amara site na ịrịọ maka aka ya na ịlụ di na nwunye, mana ka anyị chee maka ya:
Anyị na-agba gị ume, ụmụ nke Ra, oge ọ bụla ị na-emepụta ihe mgbagwoju anya, na-echeta mgbe niile na ndị ọzọ, na-achọkwa inwe ...
Ajụjụ maka ụmụazụ okpukpe dị iche iche batara: n'etiti ụmụ agbọghọ abụọ a "Christian & Muslim", ndị na-asọpụrụ Chineke nke Israel na ndị mụrụ ya site na uwe?
Nwa nwanyi na-eyiri uwe ya yiri ugbo UFO ... Ezi ma obu ugha?
Iji gwọọ ọrịa, ị ga-ebu ụzọ kweta na ị na-arịa ọrịa, mana ọ na-esiri ụfọdụ ndị Africa ike ikweta na ha na-arịa ọrịa.
Mkparịta ụka: Nostalgia - ihe okike nke ụmụ n'oge ezumike na-apụ n'anya ... Eziokwu ma ọ bụ Ụgha?
Ihe mara mma nke Togo: Akou Yayra Gaëlle Adzoh bụ ihe na-enweghị atụ na Togole Miss Miss 2015
1. ihu ọha nke India & 2. Ọnọdụ ihu ọha nke India… Kedu ihu ihu ọkacha mmasị karịa?
Ihe na-emenye m egwu abụghị mmegbu nke ndị na-emebi iwu, kama enweghị mmasị nke ndị ọma
Mgbe Chukwu gwara gị ka ị tụkwasị ya obi n'ihi na otu n'ime ihe abụọ nwere ike ime ...
Ugwu Congo Congo: Mama Amy n'ebe ahu ... Nne nke onye amara nke egwu Afrika, nne nke onye isi nchu aja na eze
Ọdịbendị na-enweghị omenala na-eme ka ọha mmadụ na-enweghị pedagogy ... "Dịka L Pauwels si kwuo"
Ọrụ iji mepụta ndụ nke na-adị gị mma, ọ bụghị maka ndụ nke na-amasị ndị ọzọ ... Atụmatụ sitere na KongoLisolo
Oscar onye America, platiarism dị ọcha nke ihe osise Africa: PTAH - Kémèt Afrique (Egypt) bụ onye na-akwado maka owuwu, ọla na ihe ọkpụkpụ.
Nnukwu NKAKA TUTI DIA TIYA (Toth ma ọ bụ Dehuty) na-akụziri anyị na: "Mgbe ntị ụmụ akwụkwọ dị njikere ịnụ, ọ bụ mgbe ahụ ka egbugbere ọnụ mejupụtara ha Amamihe."
N’agbanyeghi ebe ino, echefula ebe i si bia… don't noghi na ị na-eme ka uwa too uto, kama ino na ibi ndu gi n’ụzọ ga - eme gi obi uto.
Arụmụka: ndị ohu na-tọhapụrụ site onwe ha, na-enweghị-eche abolitionists ... Africa ohu na America wuru ha emancipation ... "Nke a bụ ihe na-ekpughe na Geneva ọkọ akụkọ ihe mere Aline"
Mma ndi Afrika bu ihe mara mma, ihe puru iche, ihe ndi na-adighi mma, ndi a na-achoghi ajuju.
Ọnụnọ dị ka nnụnụ: ọ bụrụ na i kwe ka ọ gbafuo, ị ga - enwe nsogbu ijide ya… Nwee izu ụka mara mma n'udo nke Nzambé
DRCongo bụ paradaịs maka ndị nwere ohere ... Eziokwu ka ọ bụ segha? … Ọ bụ? … Nwoke a nwere ikele ndị DRC ekele maka ihicha ya
Rwanda: Mma Rwandan… "Ihe nwanyi choro, Chineke huru ya"
See hụrụ ihe onyonyo a, ọ na-akpasu obi iwe: ọ na-ebu ibu dị arọ, akpa kol tinyere nwa ya ọ kwesịrị kilo kilogram ise nke ọ na-eburu… Ọ na-eme ihe niile ahụ, iji zụọ ụmụ ya ma kwụọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ
Ọ bụrụ na enwere nsogbu, enwere ọga. Ọ bụrụ na enweghị ngwọta, nsogbu adịghị
Naturalwa uwa dị n'ime anyị, dị ka ụwa nke ụwa dị kwa n'akụkụ anyị, mana nke "Ihe" niile dị n'ime ụwa
Arụmụka: Adolf Hitler (Eprel 20, 1889 - Eprel 30, 1945)… Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndị isi, “M ga-akụzị France na awa 24, m ga-etinye“ De GAULLE ”na karama 90 cm m ga-ebido ya na Oké Osimiri Atlantic ”
Enwere ike ịkọwa oji dị ka nke a na-ahụ anya na-ahụ anya mgbe enweghị ìhè a na-ahụ anya ruru anya
Arụmụka: n’ime alụm di na nwunye gha enye mkpụrụ ahụ, nwanyị ahụ amụọ nwa… Eziokwu ka ọ bụ ?gha?
Ọ bụrụhaala itinye ihe egwu, ọ bụrụhaala na ị mụta ihe site na mbọ gị ma na-agba mbọ, ihe ịga nke ọma agaghị agbanahụ gị
Arụmụka: ọbụbụenyi dị n'etiti nwoke na nwanyị ga-ekwe omume? … Ajụjụ na-ewelite agụụ ugboro ugboro. Ee e, ka ụfọdụ kwuru, bụ maka ndị anaghị enwe ike wezuga agụụ mmekọahụ kpamkpam. Eeh, debe ndị ọzọ, ndị na - ejikọ njikọ na - enweghị atụ. Nyocha nke mmekọrịta dị nro n'etiti ọchịchọ na iche iche!
Bolọ akwụkwọ a na-eto eto mere “ụdị ihe eji egwurugwu” nke ụlọ egwuregwu ugbu a na-enweghị ụzọ… Ekekọrịta iji gbaa ụlọ akwụkwọ a ume
Beer abụghị ihe kacha mkpa ... Gịnị ka anyị na-ahọrọ, millet iri ma ọ bụ millet ka ị ṅụọ?
Ternyaahụ dị ka nke ahụ ... Na ... Kedu ka ọ dị taa?
Mkparịta ụka: Ọ bụ ezie na ndị ọzọ nwere nkwarụ na-etinye oge ha na-arịọ arịrịọ, ọ chọtara ọrụ ... Gini ka ị chere gbasara nwoke a nwere obi ike? ... (Na)
Knowingmara na ọtụtụ ihe ka ga-amụta bụ ihe ịrịba ama nke ọgụgụ isi
Onye ọ bụla a na-apụnara (nnapụ) sitere na ndị nna nna ya na-apụ (cut) onwe ya ... N'ịbụ ndị ezughị ezu, ọ pụghị ịlụso ndị ọzọ aka, bụ ndị zuru oke
Otu nwoke kpuru ìsì gwara m na obi adịghị ya ụtọ na ya kpuru ìsì, ajụrụ m ya "n’ihi gịnị?"
Ajụjụ a ga-ajụ ndị Afrịka: brothersmụnne na ụmụnna nwanyị ndị nwanyị Africa, na-ele foto a dị n'aka ekpe tupu nnwere onwe (ihe dị ka 1916) na n'aka nri mgbe nnwere onwe (2016) chere na Afrịka agawo n'ihu (gbagoro) ma ọ bụ chịrị?
Okwu onye sage, nnukwu onye Africa na - eche echiche na onye na - ahụ ihe
Ha ma ihe anyị “leghaara anya” ha ma mara eziokwu
Ihe anwansi nke ihunanya mbu bu ileghara anya na o nwere ike ila akwusi otu ubochi
Nke a bụ oche nkwagharị nke ụlọ ọgwụ izugbe (ụlọ ọgwụ Mama Yemo): nsonaazụ nke ọrụ ise gị yana 'mgbanwe mgbanwe nke oge a' nke onye isi ala ị na-akpọ Onye isi ala Joseph Kabila gbara ume.
Ozi sitere na nna rue nwa ya nwoke: nwa m nwoke, ụmụ agbọghọ, dị ka mangore akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ka ị na-eche ka ha cha mkpụrụ iji ghaa ha, ụfọdụ amaliteworị iri ha nnu
Ndi kachasi nma n’egwuregwu ndi n’onyi n’agba egwu, nwa agbogho a agba egwu kemgbe otutu 5, o di ugbua 18
Ibi ndụ site na iji ihe ndị ọzọ rụpụtara bụ ikweta ịdị elu nke ndị a, na ịnabata adịghị ala
Ndi Africa bu nne na nna nke Man ma ndi Europe bu umu nke Man
Kedu ihe kpatara na ụmụ agbọghọ anaghị achọ "ịchụ nwanyị" mgbe ha nọ n'ịhụnanya?
Ajụjụ a ga-ajụ ndị Afrịka (Kongo): Mgbe anyị gwara gị na “Diego Cao” chọtara n'ọnụ osimiri Congo ”, ikwere ya?
Ọ bụghị n'ihi na ihe siri ike ka anyị anaghị anwa anwa, kama ọ bụ n'ihi na anyị anaghị anwa anwa gwa ha na ha siri ike
Mgbe ị na-emefu ego niile ị na-eri na nri na n’elu ụlọ, a gakwaghị agụ ọrụ gị dị ka “ohere oru ngo akụ na ụba”
Ụbọchị ndị Africa ga-aghọta obere eserese a, ihe ga-agbanwe (ghọọ) mkpịsị aka aka ... Ezi ma ọ bụ Ụgha?
Nwoke nwere ike ịrịọ mgbaghara nwunye ya ruo n’ọkwa a ikpere n’ala n’ihu ọha?
Ọ bụrụ na osisi ahụ maara ihe anyụike ahụ na-echere ya, ọ garaghị enye ya ihe ahụ
Ọ dị mkpa ịmara, na onye ọ bụla batara na ndụ gị egoghị ka ọ nọrọ ebe ahụ
Mma Senegalese: Gabourey Sidibe bụ onye omekorita America amụrụ na Mee 6 na Brooklyn nye nne mụrụ nwa Africa na nna ndị Senegal.
Mma ndi American American: Vin Diesel bu onye kachasi ihe nkiri na Hollywood nke 2016 dika KongoLisolo
Ọ bụrụ na okpukpe niile na-akụzi udo ... Gịnị mere na ha apụghị ibikọ ọnụ na udo?
Isi nkịta (nke Africa) ... Ọ na-aga n'aka nri ... Ọ na-aga n'aka ekpe ... Ma asshole (Africa) ka nọ n'etiti
Ị na-ele anya na-ele ihe a? ... Mgbe ị na-enweghị olileanya, lee ya ... (Na)
Mụ nwanyị kwesịrị iji mmụọ ha kpọrọ ihe karịa ịma mma ha, ihe dị iche na-abụkarị ikpe
Black Mma na Uruguay ... (VIDIO)
Onye na-ele anya olile anya bu onye kachasi nma
Ahụ na uche: Ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ na ị bụ mmụọ nke bi n’ahụ
Amụma nke Afro-American: Black akpụkpọ anụ kachasị mma n'ụwa ... (VIDIO)
Nature anaghị ebo mmadụ ebubo, ọ na-echere ya n'ihi na ị naghị ebo onye ị hụrụ n'anya ebubo na ọ rarara gị nye, were ya na iwe na ị tụkwasịrị ya obi.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịkwanyere nkwanye ùgwù: Mgbe ọ na-alụ ọgụ ná ndụ karịsịa ịzụ ụmụ ya, echela ya akụkọ banyere Moses, Jizọs, Mohammed, Jekọb ... Etc
Mma Africa di ocha… Onye na-ekwu ozo?
Mgbe mmadụ niile nwere otu echiche, ọ bụ na onweghị onye na-eche ọtụtụ ihe
Abụ m onye Africa ma jiri ya na-anya isi ... Abụ m na a ga - anọ ...
Madonna, Miley Cyrus & Lady Gaga, ha emeghị votu maka Donald Trump, maka na Trump na-emebi aha ụmụ nwanyị
Ọ dịghị ihe dị ụkọ karịa ụdị pụrụ iche KongoLisolo
Enweghị nsọpụrụ na-enweghị nnwere onwe: Anyị na-ahọrọ nnwere onwe na ịda ogbenye karịa akụ na ohu
Ihe onyonyo a sitere na ọchịchị “nnukwu onye enyemaka mba” Gnassingbé Eyadéma… Ihe dị mkpa abụghị nsọpụrụ maka ọdịnala, kama onyonyo nke ọdịnala ọdịnala a, nke na-eleda anyị anya.
Kedu nọmba ga-anọchi “?”
Ọdịiche nke afọ egbochibeghị obi n'ịhụnanya
Mgbe ihe mepere emepe, ihe niile dị ya gburugburu na-agbakọta n'otu ụzọ ahụ
Ee, abum oji, ma obim adighi
Ọtụtụ alụm di na nwunye dara n'ihi na e wughi ha dịka usoro nke nna nna anyị ha
N'ime ụlọ temple abụọ a maka Jizọs rịọrọ ndị mmadụ ka ha bibie na ọ ga-ewulite ya n'ime ụbọchị atọ.
Kwụsị ịkpọ ụmụ nwanyị gị: Mmanụ a ,ụ, chọkọleti, shuga, wdg ... N'ihi na ị na-emebi ha
Nwa akwukwo ụlọ akwụkwọ sekọndrị South Africa dị afọ 13; onye ụlọ akwụkwọ ahụhụ “Pretoria Lycée zuba les filles” maka ime ntutu ya na Afro, na 2003
Nnochite anya dị ezigbo mkpa: Art achọghị ka ihe nnọchianya nke ihe mara mma, kama ọ bụ nnọchite mara mma nke ihe
Mali: Nwa akwukwo a nke Malian na-eme uzo ya iji gafee osimiri kwa ubochi
Ekwetere m na enwere m ike ịchọ, mana ahụghị m ebe a na 2017
Brazivillian Mma: Nwee obi ụtọ ịbụ onye Africa na mmalite anyị ekwesịghị ịma anyị ikpe, ụmụ nwanyị ojii dị ogologo ndụ
Njehie a kagbuola uru mbọ a rụzuru!
Ajuju nke ndi mmadu na acho ihe ndi Congo: Ọ bụrụ na Tshisekedi nwụrụ taa, kedụ ihe ga - eme ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, ezinụlọ ya na ọgba aghara (ndị mmegide nke Congo)? … Havechetụla nke ahụ?
Madụ abụghị ihe o chere na ya bụ, mana ọ bụ ihe o zoro
Ndụ bụ ihe kacha njọ n'ụwa, ọtụtụ (ndị Africa) nwere afọ ojuju ịdị, enweghị ihe ọzọ.
Mma Africa: Enwere m mmasị na nke ahụ, ọ bụ sexy n'ezie, mana ọtụtụ (ndị isi ojii) ndị Africa ga-eche na ọ ruru unyi ... "Ma ruru unyi n'ihe metụtara gịnị? "
A na m atu egwu ubochi nke teknụzụ ga-ebute ụzọ karịa mmadụ anyị ... otu ọgbọ nke ọgba aghara ga - ebi n'ụwa
Onye ara Africa na-eme otu ihe mgbe niile ma na-atụ anya nsonaazụ dị iche
Nwanyị maara uru ọ bara adịghị arịọ maka ịhụnanya, mmetụta ịhụnanya ma ọ bụ nchebara echiche
Miss, mụta ịnọ n'oche ... Ndị uweojii na-enwe mmetụta nke uwe
Nwanyị siri ike maara etu esi edobe ndụ ya n’usoro. N'agbanyeghị anya mmiri n'anya ya, ọ na-ejikwa ọnụ ọchị kwuo “adị m mma”
Ezi obi ike abụghị ike nke ndị dike na-eme ihe ọjọọ, kama ọ bụ uche siri ike nke omume na echiche
Ọ mara mma, ọ dị oji, na oji na nke na-enwupụta ụwa na ntụgharị nke anụ ahụ. O ncha n’iru, dika a ga-asi na Chi nke zoro ezo nzuzo nke akpukpo aru ya
Ekwensu ahụbeghi ọdịdị ya, ọ dị anyị n’aka iwe iwe ya na ịbụ onwe anyị
Angola: Mma nke Angola akara gala nke, KongoLisolo
Mma Kongo: Chukwu kere ya, ihe okike ya na - eme Setan maa jijiji
Think chere na Jizọs Kraịst ga-abịa ọzọ ịzọrọ nwebiisinka ya?
Idrissa Akuna omee
Chineke ekeghị ụmụ mmadụ ara, kama ka o nye ụmụ ọhụrụ agụụ na-agụ
Ekpela ikpeKongoLisoloSite n'ile ya anya
N'ime anụ ụlọ, mgbe ị kpebiri iwere selfie na enwe na ọ hụrụ gị n'anya…
Onye ọ bụla nke na-eche ịmata “ụmụ nwanyị” amaghị ha.
Mmụta bụ akụrụngwa kachasị ike
Echefula ihe a mere
Lelee onwe gị, o nweghị ihe ị ga-ekwu
Ezi akụ abụghị ihe ị nwere, kama ọ bụ ihe ị nyere
Changenabata Mgbanwe bụ ike ịga n’ihu.
Oge gara aga ... .. Ị na-echeta?
Ndị na-eso ụgbọ elu nke Zailọ ọrụ Air Zaire nke Zaire, Taa Democratic Republic of Congo
Melanin, otu n'ime ihe mara mma na okike ... ojii dị mpako
Ikike elu bụ ọrụ dịịrị gị
Donye ka i chere siri ike?
Kwere na onwe gị na ihe niile ị bụ. Mara na odi ihe n’ime gi nke kacha elu n’agha o bula
Site na: Admi2na: March 12, 2017 00: 40 Enweghị asịsa
-Ochichi, ikpe na ezighi ezi na nrụrụ aka = M ga-ekwugide ha ruo mgbe iku ume m ikpeazụ
- A na m atu egwu ime ya ka m ghara iwesa ndi mere ohi iwe = Mba! N'ihi na ọ bụghị naanị ha nwere ikike inweta “paradaịs”
-Ime ihe ike na-eme ka anyị kwụsị ihe ọjọọ ndị a = Mba! Ọgba aghara bụ "akụrụngwa" kacha mma "anyị ga - eji ya gbaa“ ọrịa ”ọrịa niile.
-Adị m eme post a iji hụ ọtụtụ "amasị" na "kwuru" = Mba! Achọghị m otu ma ọ bụ nke ọzọ.
A ga m egosi ụmụnna m na m maara ihe karịa ha = Ee e! Anyị niile bụ otu.
M ga-amanye ụmụnna m ka ha nupụ isi = Mba! Ana m echetara ha na Afrịka anyị esighi n'ụlọ ezumike ahụ pụta
Akwukwo a bu nke onye o mara. Ọ chọghị ịma banyere “ndị nwenụ n'akụkụ ọchịchịrị”. Dị ka ihe na-egbu egbu nke mma, ọ ga-anwa ikpochapụ ọrịa cancer niile nke psyche!
Ọkt20 01: 29
òtù ezinụlọ Ọkt21
Hi / le: 23/18 ℃
iru mmiri: 81
iru mmiri: 66
Hi / le: 19/16 ℃
Hi / le: 21/16 ℃
Hi / le: 15/11 ℃
Gịnị bụ àjà (a na-akpọ) Kraịst ka e jiri rụọ ọrụ? “Jesus Christ edi Enye emi akabarede edi ndidi ye edidi onyụn̄ afiak edem; ọ bịara ịchọ na ịchekwa (echee) ihe furu efu; o chere na ya biara ibupu nmehie nke uwa ”; dika ihe edere banyere ya si di: ka anyi kweta
Ọktoba 19, 2020 12: 12
Chineke nke Ndị Kraịst: Chineke nke Ndị Kraịst emeela ọtụtụ mpụ nke mgbukpọ; site n'izo aka na Baibul, (okwu nke Chineke), nye ndi Kraist, egosiri na -enwegh ntupo na Chi ha bu onye gbuputara mgbukpo, na nke puru igbusi ozo "Ka anyi tulee ihe edere aka na mpụ nke mgbukpọ nke Chineke n'onwe ya mere- ọbụna, dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo, Bible ”
Ọktoba 19, 2020 09: 09
Nke a bụ akparamagwa nke Chukwu nke Ndị Kraịst: ka anyị lelee anya n’omume nke Chukwu nke Ndị Kraịst na nke Ndị Kraịst n’onwe ha, onye ọ bụla nwere ike hụ nke a nke ọma; anyị anaghị echepụta ihe ọ bụla, wee gwa anyị ihe ị chere
Ọktoba 19, 2020 06: 00
Okpukpe ọ bụ ọgwụ? Karl Marx, mgbe o ji ezi uche mụọ gbasara ọha mmadụ okpukpe na ụmụazụ ya, wee chọpụta na "Okpukpe bụ opium maka ndị mmadụ"; nke na-egosi na okpukpe bụ ọgwụ ọjọọ na ndị na-eme ya bụ ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ
Ọktoba 19, 2020 04: 00
Mc Mbuyi Tshib's on Njikọ dị n'etiti egwuregwu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị: na August 18, 1964 South-East Africa amachibidoro iwu asọmpi Olympic, ruo mgbe 1990s, ndị isi ojii ojii na South Africa, kamakwa ndị niile na-enweghị ọcha dịka ndị India, nọrịrị ugbu a na obodo ahụ ka edobere nkewa nke a kpọrọ aha n'okpuru "Afrikaner - Elekere Anya"
Nunes on A na - enweta ọganiru nke mmụọ site na ihe omuma: ihe omuma diri Chineke, n'ihi na Chukwu bu ihe omuma
Naliaa on Ozi ojoo ojoo banyere ndi Christian Black / Africa; ozia adaala ugbua, o sitere na kansụl nke ụka Kraist dị na Black Africa; ọ dị nro, mana enweghị ihe ọ bụla, ọ mere: a gaghị enwe ememme Ngabiga na 2021
John Samuel on Otu n’ime ihe doro anya ekwekọghị na akwụkwọ nsọ: anya dị n’etiti Ijipt na Israel dị ihe dịka 613 km, mana dịka Akwụkwọ Nsọ siri kwuo, Mozis na ụmụ Izrel were afọ iri anọ iji wuchaa njem ha wee banye n’ala ahụ ekwere na nkwa “Na-atụ anya”
Umoja on Nchịkọta ndị America megide Onye Isi Ala Jean-Bertrand Aristide (February 2004): ndị America nwere “Ọnọdụ Otu” maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọjọọ niile nke ndị Haiti mgbe ha na-anwa ịkwatu oge ọ bụla ndị isi ala niile jụrụ ịjụ. na-arụ ọrụ maka ọdịmma ndị America… (VIDEO)